င ဝန် န ဒီ: September 2009
RIT/YIT Electrical Engineering Alumni Saya Puzawpwe 2009, Yangon, Myanmar
RIT/YIT refers to all "Set-Hmu Tekkatho" under various names (RIT, YIT, MIT, YTU, MTU, xTU, etc.) and EE refers to all EE and related majors (EP, EC, Electronic, etc.)
We would like to shareagreat news that our EE alumni (Myanmar) is organizing EE Saya Puzawpwe 2009 ("EE-SP-2009") event which will be held on 15-Nov-2009 (Sunday) in Yangon, Myanmar. This isarare opportunity for all EE alumni everywhere to show our deep respect and gratitude for our Sayas, in appreciation of all the teaching, coaching and guidance they have given us.
You are therefore warmly invited to participate in this event - by contributing your physical, moral and/or financial support.
Detailed Program is as below.
Date: 15-Nov-2009 (Sunday)
Time: 08:30am to 12:00pm
Venue: MICT Park (Functional Hall), Yangon, Myanmar.
Here are the main Committee members/volunteers in Myanmar for organizing and fund-raising for EE-SP-2009:
1. Ko Myo Swe (EC-80) +959 6463287
2. Ko Aung Naing Myint (EC-81) +959 9030253
3. Ma L Khuntaung (EC-84) +959 5135365
4. Ko Myo Naing (EC-86) +959 5012601
5. Ma Thida Aye (EC-86) +951 514977
6. Ma Khin Sandar Tun (EC-91) +959 5000735
7. Ko Min Tun (EP-95) +959 59121154
8. Ko Aye Min Hlaing (EC-95) +959 5171517
Here are the volunteer representatives in Singapore to assist the main Committee (Myanmar).
1. Ko Aung Lin "Thiri Mon" (EC-85) +65 93820995
2. Ko Pye Nyunt (EC-86) +65 96884316
3. Ko Nyi Nyi Win (EC-91) +65 96633035
4. Ma Myo Myat Thi (EC-92) +65 90284990
5. Ma Soilan Khine (EC-93) +65 98519030
6. Ma Myint Myint Mon (EC-93) +65 90626784
7. Ma Myo Sandar Khin (EC -94) +65 91458384
8. Ma Meme Thant Zin (EC -94) +65 96453833
9. Ma Khine Khine Win (EC-95, 1st Batch) +65 91183646
10. Ma Kyawt Kyawt Khaing (EC-95, 2nd Batch) +65 98446120
11. Ko Sanyu Hlaing (EP-98) +65 98463577
12. Ma Hla Nu Phyu (EP-98) +65 93669150
13. Ma Pyu Myint Wai (EC-2000) +65 90259951
14. Ko Kyaw Zwa (EC-96) +65 94579409
Please contact any of the above representatives at the earliest, to makeacontribution and/or to obtain more information.
For Yangon alumni, the deadline to collect the funds and receipt books is 25-Oct-2009. For overseas, the deadline is one week earlier (18-Oct-2009) since we haveaplan to make record book with contributors photos. So, if possible, all the contributors' passport size photos (hard or soft) are needed.
(Yangon and Singapore)
Posted by ငဝန်နဒီ at 12:36 PM No comments:
the heaviest newborn
An Indonesian woman has given birth to an 8.7-kilogramme (19.2-pound) baby boy, the heaviest newborn ever recorded in the country,adoctor said. The baby boy is pictured here next toababy of average size atahospital in Medan, North Sumatra.
Posted by ငဝန်နဒီ at 11:27 PM No comments:
ရန်ကုန်မြို့၊ မလိခလမ်း (အေဒီလမ်း)ရှိ၊ နိုင်ငံတော် သမ္မတဟောင်း၊ ဒေါက်တာမောင်မောင် (ကွယ်လွန်)၏၊ နေအိမ်မှာ၊ လွန်ခဲ့တဲ့(၆)ရက်ခန့်က၊ ဓါးပြတိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ မျက်နှာတဝက်ကို အဝတ်မဲဖြင့်၊ ဖုံးအုပ် ပြီးရုပ်ဖျက်ထားတဲ့၊ ဓါးပြ(၂)ဦးက၊ ကွယ်လွန်သူ ဒေါက်တာမောင်မောင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူ၊ ဒေါ်သန်းမြင့်ထံမှတိုက် ရောင်းထားသောငွေနဲ့၊ လက်ဝတ်ရတနာများကို၊ ဓါးပြတိုက်တာလို့ သိရပါတယ်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 11:06 AM No comments:
မကြာမည်လာမည်မျှော်...ဂျပန်မှထုတ်လုတ်ပြီး ...အမေရိကန်တွင် နမူနာပြသလျှက်ရှိသည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 10:56 AM No comments:
စက်ဘီး ကိုလေမထိုး တော့ဘူး
စက်ဘီး ကိုလေထိုးရန် မလို ပဲ တာရာ အလုံးလိုက် လေးလေးပင်ပင် မဟုတ်...
ကျူအစား လေထိုးရမည် နေရာတွင် ..
ပြုပြင် ထားသော ဂျယ် အရည်တစ်မျိုးကို အစားထိုး ထည့်သွင်း ခြင်းဖြင့် ဂျပန်တွင် စမ်းသပ် အသုံးပြုနေသည်။
စီးပွားဖြစ် ထုတ်လုပ်မည်ကို မသိရသောလည်း အဆိုပါဂျယ်သည် သံစူး သောလည်း စိမ့်မထွက် ...အပူချိန် တခုတွင် အေးခဲမည်ဖြစ်သဖြင့် သံစူးသော်လည်း စိမ့်မထွက်...လေခဏခဏ ထိုးရန်လည်းမလို...စက်ဘီးသမားများအတွက် အဆင်ပြေ ပေမည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 10:37 AM No comments:
ပိုစ့်များမှ စာများသည် လွတ်လပ်စွာကူးယူနိူင်ပါသည်....
သို့ သော်...ခင်မင်ရင်းနှီး စွာဖြင့် သုံးသော အသုံးအနှုန်း များအား
သူတစ်ပါးအား နှစ်နာစေလိုသော ဆန္ဒဖြင့် ပြန်လည် ဖော်ပြ ရေးသားခြင်းများမပြုလုပ်ပါရန်....
message box ...မှ အမည်များအား ....ဦး၊ဒေါ်၊ကို၊မ ...များ မှားယွင်းမှာစိုး သဖြင့် အမည်များရှေ့ တွင် ဦး၊ဒေါ်၊ကို၊မ....မတတ်ခြင်းကို နားလည်ခွင့် လွှတ်နိူင်ပါစေ။ ။
Posted by ငဝန်နဒီ at 3:17 AM No comments:
ကျပ် (၅,၀၀၀) တန် အသစ်ထုတ်မည်
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လာမည့်အောက်တိုဘာ (၁) ရက်မှ စတင်ကာ (၅,၀၀၀) ကျပ်တန် ငွေစက္ကူအသစ် စတင်ထုတ်ဝေ သုံးစွဲတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း စစ်အစိုးရပိုင် ရုပ်မြင်သံကြား သတင်းဌာနများက ယမန်နေ့ညပိုင်းက ကြေညာလိုက်သည်။
အသစ်ထုတ်ဝေမည့် (၅,၀၀၀) ကျပ်တန် ငွေစက္ကူအသစ်သည် အလျား (၁၅) စင်တီမီတာနှင့် အနံ (၇) စင်တီမီတာရှိကာ ထင်ရှားသောအရောင်မှာ အနီရောင်ဖြစ်ပြီး ရှေ့တွင် ဆင်ဖြူတော်ပုံ နှင့် နောက်တွင် လွှတ်တော်အဆောက်အဦပုံပါရှိကြောင်း ယနေ့ထုတ် သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယခုငွေစက္ကူသစ်ထုတ်ဝေသော်လည်း လက်ရှိသုံးစွဲနေဆဲ ငွေစက္ကူများကို ဆက်လက်သုံးစွဲခွင့်ရှိကြောင်း ပြောကြားသည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 11:48 PM No comments:
ဒူးယားဆောင် စတုတ္ထနှစ် များနေရာ မြေညီထပ် တွင် နှစ်စဉ်တွေ့ နေကျ ကျောင်းသားများအပြင် ထူးထူးခြားခြား အစ်ကိုတစ်ယောက်တွေ့လျှင် ကျောင်းသားများက ဒီအစ်ကို ကိုတွေ့ ဖူး သလိုဘဲနော်...
သို့ နှင့် အောင်လွှမ်းမိုး က
အစ်ကို ...အစ်ကို ကိုတွေ့ ဖူး သလိုဘဲနော်...
ထိုအစ်ကို က ..
ငါ ကိုတွေ့ ဖူးမှာပေါ့....
ငါ လဲ ဒီအဆောင် ကပဲလေ.....
မင်းတို့ပထမနှစ် ကတည်း က ငါ က တတိယ နှစ် လေ....
အောင်လွှမ်းမိုး က ...
....ဟာ... ဘယ်လို ....အစ်ကို...
DT ဆိုင်ကယ်နဲ့တစ်ယောက်လေ...အဲတာ ...ငါပဲလေ...
စာမေးပွဲတွေ ကျပြီး.....EXTRANAL ရောက်ပြီး ....
စတုတ္ထနှစ် ရောက် ပြီး
ဟာ...ဒါဆို...အစ်ကို ...အစ်ကိုလို့ ..ခေါ်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲ...
..... အစ်ကို ကို နောင်တော်ကြီး လို့ ဘဲ ခေါ်တော့မယ် ဗျာ...
.... အေး ....မင်းတို့...သဘောဘဲ....
မြို့ ပြ အင်ဂျင်နီယာ နဲ့ ကျောင်းပြီးသော ...မာမီမိုး....အောင်လွှမ်းမိုးနှင့် Chemical အင်ဂျင်နီယာ နဲ့ ကျောင်းပြီးသော မန္တလေးသား နောင်တော်ကြီး ကိုကျော်စွာမြင့် သို့မှတ်မှတ်ရရ....
Posted by ငဝန်နဒီ at 12:52 PM No comments:
ငါးထောင်တန် ငွေစက္ကူများ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထွက်ရှိ မည်
လာမည့် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ၂၀၀၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့ ည တွင် ငါးထောင်ကျပ်တန် ငွေစက္ကူသစ်များ ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဝေတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းက ကြေညာသွားသည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 10:47 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံ ကျောင်းသား လှုပ်ရှားမှုသမိုင်း ရေးသားသဖြင့် ၁၁ နှစ်ကျော် အကျဉ်းချခံရပြီးနောက် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင် ကိုအောင်ထွန်းသည် ပဲခူးတိုင်း သာယာဝတီထောင်မှ ယခုလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ပြန်လွတ်လာသည်။
“၁၈ ရက်နေ့က ပြန်လွတ်လာတာပါ။ သာယာဝတီ ထောင်ကပါ။ သူက ၉၈ ကနေ ထောင်ကျတာဆိုတော့ ၁၁ နှစ်ပေါ့။ အခု သူ့အိမ်မှာပါပဲ” ဟု ကိုတိတ်နိုင်က ပြောသည်။
၁၉၉၀ ခုနှစ် ဧပြီလအတွင်း ဗကသ (အောက်ဗမာပြည်) ဖွဲ့စည်းရာ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၁၉၉၀ ခုနှစ်အတွင်း မန္တလေးမြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ဗကသ ညီလာခံ၌ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရသည်။
ရက် ၃၀ အတွင်း လွှတ်တော်ခေါ်ယူနိုင်ရေးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို ဝိုင်းရံကူညီရန်ဟူသော အချက်အား မန္တလေးညီလာခံမှ ချမှတ်ခဲ့ရာ အဓိက အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့သူများတွင် ပါဝင်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။
သူသည် ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ ဂန္ဒီညီလာခံအကြို လူထုလှုပ်ရှားမှုများကို ဗကသမှ ဦးဆောင် လှုပ်ရှားခဲ့ရာ ပါဝင် ခေါင်းဆောင်ခဲ့သည်။ ဂန္ဒီညီလာခံအပြီး စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ဗကသမှ အခြား ခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူ အဖမ်းခံခဲ့ရကာ ထိုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ် ချမှတ်ခံရသည်။
ထို့နောက် ထောင်မှလွတ်ပြီး ကျောင်းတက်ခွင့်ရသဖြင့် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် စက်မှုတက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းပြီးခဲ့သည်။
၁၉၉၆ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းမှစ၍ "ကျနော် အရေးချင်ဆုံး စာအုပ်" ဟု အမည်ရသော "မြန်မာနိုင်ငံ ကျောင်းသား လှုပ်ရှားမှု သမိုင်း" စာအုပ်ကို စတင်ပြုစုခဲ့သည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း ၎င်းစာအုပ်ကို လျှို့ဝှက်ဖြန့်ချိသဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၁၇ နှစ် ကျခံခဲ့ရသည်။
စာမျက်နှာပေါင်း ၇၀၀ ခန့်ပါရှိသည့် သူ၏ စာအုပ်ကို ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဧပြီလအတွင်းက ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် (နိုင်ငံခြားရေးရာ ကော်မတီ) က ထုတ်ဝေဖြန့်ချိနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
ကိုအောင်ထွန်းကို ကမ္ဘာတဝှန်း နိုင်ငံရေးအရ ဖိနှိပ်ခြင်းခံနေရသော စာရေးဆရာများအား ပေးအပ်သော ဟယ်မန်၊ ဟန်းမတ်ဂရန့်ဆု (Hellman/Hammett Grant) ကို ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့စာရေးဆရာများ အသင်း အင်တာနေရှင်နယ် - ပန်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော နော်ဝေ၊ ကင်ဘာရာ၊ ကနေဒါရှိ ပန်စင်တာများက သူ့ကို ၎င်းတို့အဖွဲ့များ၏ ဂုဏ်ထူးဆောင် အဖွဲ့ဝင်တဦးအဖြစ် ကြေညာခဲ့သည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 11:10 AM No comments:
ဂျပန် ရှိ Softbank အသုံးပြုသူများ အတွက်...ဖုန်းလိုင်းပိတ်လိုလျှင်..
ဂျပန်ရှိ Softbank အသုံးပြုသူများ အတွက်...ဖုန်းလိုင်းပိတ်လိုလျှင်..နောက်ဖုန်းတလုံး ချိန်းလိုလျှင် သော်လည်းကောင်း
Softbank ဖုန်း SHARP 911SH ဖုန်းလိုင်း အားသွား ပိတ် ပြီး iphone အသစ်သို့လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ် များပြောင်းထည့်အကူအညီ ရယူရာ ပြောင်းလဲထည့်သွင်းမပေးနိူင်...
Softbank ဖုန်း SHARP 911SH ဖုန်းလိုင်း အားသွား ပိတ် ပြီး SIM card ထုတ်ပြီးသိမ်းသွားလျှင်
SHARP 911SH ဖုန်း မှ လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ် ပျောက်ဆုံးသွားပြီး
TV လဲကြည့် မရတော့...
SD card လဲဖတ်မရတော့...အမှန် တကယ် ဖြစ်ခဲ့ပါသဖြင့်
ထိုသို့ဖြစ်လျှင် .....သင့်ဖုန်းအားပျောက်သည်ပြောပြီး ပိတ်လျှင်.....အဆင်ပြေပါမည်....
ထိုနေ့ တွင် prepaid card ဖုန်း MISUBISHI V301D ပိတ်ရာတွင် လိုင်းသာပိတ်သွားပြီး ကျန်တာအားလုံးအသုံးပြုနိူင်ပါသည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 10:06 AM No comments:
လူရှေ့ဆိုမခေါ်ရဲ ဘူး
ရေနံ အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ် တွင် စာသင်ယူသူများမှာ ကျောင်းသားများသာ ဖြစ်သည်။
Field ဆင်းရာတွင် တစ်ခြား အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ် များနှင့်မတူ အတူတကွ
ချောက်၊ရေနံချောင်း၊မန်းရေနံမြေ တို့ တွင် သွားရောက် အတူတကွ လေ့လာသင်ယူရသည်...
တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ရင်းနှီးကာ နာမည်ပြောင် များဖြင့် ခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိသည်...ဘဲကြီး၊ဂျပု၊ငကျိုး၊ဒေါင်ကြီး...စသည်ဖြင့်ခေါ်ဝေါ်ကြရာ
မုံရွာမှ သန်းဇော် ကိုလည်း နာမည်ပြောင် ဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ရာ အချင်းချင်းရှေ့ တွင် ခေါ်ရာတွင် ကျောင်းသားအချင်းချင်းရှေ့ တွင် ခေါ်ရာတွင် ပြဿနာမရှိသော်လည်း အများရှေ့တွင် မူခေါ်ဝေါ်ခြင်း အလျဉ်းမရှိ...လူအများ ရှေ့ဆိုမခေါ်ရဲ ။
ကဲမိတ်ဆွေ သိလိုလျှင် ရေနံမြေ တို့ တွင်Field ဆင်းခဲ့သော ရေနံ အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ် ကျောင်းသားဟောင်းများကိုမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Fieldဆင်းခဲ့သော ချောက်၊ရေနံချောင်းကိုအမှတ်တရ.......အလုပ်လုပ်ခဲ့သော မန်းရေနံမြေကိုလည်း သတိတရ...
Posted by ငဝန်နဒီ at 7:08 PM No comments:
ရုပ်ရှင်နှင့် ဗီဒီယို ထုတ်လုပ်သူများ သီချင်းအတွက် ခွင့်ပြုချက်ယူရမည်
ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယို ထုတ်လုပ်သူများသည် အသုံးပြုမည့် တေးသီချင်းများကို သက်ဆိုင်ရာ အနုပညာရှင်များ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သာ သုံးစွဲခွင့် ပေးတော့မည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ဂီတအစည်းအရုံးက ပြောသည်။
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်၊ ဂီတလောကရှိ အနုပညာရှင်များ မူပိုင်ခွင့်နှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင် လာစေရန်နှင့် မည်သည့် အနုပညာ လုပ်ငန်းမဆို တန်ဖိုးထားလာစေရန် ရည်ရွယ် လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဂီတအစည်းအရုံး တွဲဖက် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး မောင်သစ်မင်းက ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
“မူပိုင်ခွင့်ဆိုတာ မြန်မာပြည်နဲ့ သိပ်မရင်းနှီးသေးဘူး။ ရင်းနှီးဖို့၊ ထွန်းကားလာဖို့။ ဒီလိုလုပ်လိုက်တော့ အနုပညာ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ တဦးနဲ့ တဦး တန်ဖိုးထားလာစေဖို့နဲ့ ငွေကြေးအရ သူ မရဘူး၊ ငါ မရဘူးဆိုတာမျိုး အငြင်းပွားမှု မရှိအောင်ပေါ့ဗျာ” ဟု သူက ပြောသည်။
ခွင့်ပြုချက်လက်မှတ် တောင်းခံရာ ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယို ထုတ်လုပ်သူများတွင် အဓိကတာဝန်ရှိပြီး၊ တေးသီချင်း တပုဒ်အတွက် ပေးဆောင်ရမည့် ငွေကြေးကိစ္စများကိုပါ ၎င်းတေးသီချင်း၏ တေးရေး၊ တေးဆို၊ တီးခတ်သူများ၊ အသံဖမ်းသူများနှင့် ကနဦး သဘောတူလက်မှတ် ရရှိထားရန် လိုအပ်မည်။
“တချို့အဆိုတော်တွေက သီချင်းကို အခကြေးငွေ မယူဘူးဆိုတာလည်း ရှိနိုင်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အရင်ဆုံးတော့ အဲဒီလူတွေရဲ့ ခွင့်ပြုချက် လက်မှတ်စုံပြီးမှပဲ ဂီတအစည်းအရုံးက လက်ခံအတည်ပြုပေးမယ်။ မစုံရင်တော့ စုံတဲ့အထိ ယူခိုင်းတော့ အချိန်ကြာမှာပေါ့။ လက်မှတ်စုံရင်တော့ ဒီနေ့ယူလာရင် နောက်တနေ့ ရမယ်လေ” ဟု မောင်သစ်မင်းက ပြောသည်။
ယခုအစီအစဉ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ဂီတအစည်းအရုံး (ဗဟို)နှင့် ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းတို့ ပူးတွဲ လုပ်ဆောင်ကြခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ ယခုလ ၁၅ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ ဂီတအစည်းအရုံးက စတင်လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ့ဂီတလောကတွင် အကျိုးအမြတ် ရရှိသူများသည် နာမည်ကြီး အဆိုတော်တချို့နှင့် နာမည်ကြီး တီးဝိုင်းတချို့သာဖြစ်ပြီး လူနည်းစုဖြစ်သော်လည်း တေးရေးသူများအနေနှင့် ငွေကြေးရရှိမှု နည်းကြောင်း နာမည်ကြီး တေးရေးနှင့် အဆိုတော် ဆောင်းဦးလှိုင်က ပြောသည်။
“နာမည်ကြီးအဆိုတော်က သူ့ရဲ့ သီချင်းတပုဒ်ပေါက်ရင် ရှိုးတိုင်းမှာ ပိုက်ဆံရတယ်။ အနည်းဆုံး ၁၅ သိန်းအထိ ရတယ်။ တီးဝိုင်းသမားတွေကလည်း ရှိုးရှိရင် ရှိသလောက်တော့ ပိုက်ဆံရကြတယ်။ တေးရေးက တခါပဲ ရတယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
တေးရေးသူတဦးသည် ရုပ်ရှင်တေးတပုဒ်ကို ကျပ် ၃ သိန်းနှင့် ဗီဒီယို တေးသီချင်းအတွက် ကျပ် ၁ သိန်းအထိသာ ရရှိကြောင်း သိရသည်။
“ကျနော်တို့ တေးရေးသူတွေ ပိုက်ဆံရ နည်းတယ်၊ များတယ် မပြောလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တေးရေးတွေအနေနဲ့ မူလတေးအပ်တဲ့အခါမှာ ပိုက်ဆံ ရပါတယ်။ ရေရှည်မှာ မူပိုင်ခွင့် (copy right) ရှိလာရင်တော့ ဂီတလောက အခြေအနေ ကောင်းလာမှာပါ” ဟု ကိုဆောင်းဦးလှိုင်က ပြောသည်။
ယခုအခါ မြန်မာအာဏာပိုင်များက ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျီနီဗာမြို့အခြေစိုက် ကမ္ဘာ့ မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ WIPO ၏ စည်းမျဉ်းဥပဒေများကို ကိုးကားထားသည့် ခေတ်နှင့်လျော်ညီသော မူပိုင်ခွင့် ဥပဒေတရပ် ရေးဆွဲနေပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးနိုင်မည်ဟု ဂီတအစည်းအရုံး အဆိုအရ သိရသည်။
မူပိုင်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ခံစားခွင့်အဖြစ် မန္တလေး FM မှ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၀၈ ခု စက်တင်ဘာလမှ စတင်ကာ တေးသီချင်းတပုဒ်ကို တကြိမ်ထုတ်လွှင့်လျှင် ၁၂၀၀ ကျပ်နှုန်းဖြင့် သီချင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် တေးရေး၊ တေးဆို၊ တီးခတ်သူနှင့် ထုတ်လုပ်သူတို့အား ပေးနေပြီဖြစ်သည်။
မန္တလေး FM က ပြီးခဲ့သည့်နှစ် စက်တင်ဘာလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည့် သီချင်းများကို အကြိမ် အရေအတွက်အလိုက် စာရင်းဇယားများဖြင့် စုပေါင်း စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ (Collective Management Committee) - CMC သို့ ပေးပို့ကာ ကျသင့်ငွေများကို ပြန်လည် ပေးချေခဲ့ကြောင်းနှင့် ယခုနှစ်အတွက် ၄ လ တကြိမ်နှုန်းဖြင့် ဆက်လက်၍ ပေးချေသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စစ်အစိုးရပိုင် ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်း တခုဖြစ်သည့် MRTV -4ကလည်း ယခုနှစ်အတွင်း ၎င်းတို့၏ ရုပ်သံလိုင်းအတွက် တေးဂီတ ပညာရှင်များကို ထိုက်သင့်သည့် အနုပညာကြေးများဖြင့် ခေါ်ယူအသုံးပြုနေသည်။
စဉ့်ကူဆောင် ရဲ့ညဉ့်လယ်မှာ ကိုကျော်တစ်ယောက် အိပ်မပျော်နိုင် တွေးတောငေးမောရင်း တမ်းတ လာသည်...
ကိုကျော် လွှမ်းမောဖွယ် တို့ ကို စဉ်းစားရင်း
ဒူးယားဆောင် သို့လမ်းလျှောက် လာပြီး အောက်ဆုံးထပ်ရှိ ပုသိမ်သား သူငယ်ချင်း အခန်း သို့ ရောက် လျှင်...
ညက ၁၂နာရီကျော် .....
ဒေါက် ...ဒေါက် .....
တိုးတိုးလေး အခန်းတွင်း သို့ .....
အခန်းတွင်း မှ..... ဟုတ်...ဟုတ်ကဲ့....
ထိုစဉ်ကိုကျော်က.... ငါကိုကျော် ပါ ကွ...
အခန်းတွင်း မှ တံခါး ကိုဖွင့် ရင်း
ငါဖီလင် လာလို့.... ဂစ်တာ တီးချင် လို့ 
သူများတွေ အိပ် ကုန် ပြီ ဆိုတော့
မင်းဆီ.... ဂစ်တာ လာ ဌားတာ...
ဟာ... ကိုကျော် တို့ကတော့ လုပ်ပြီ....
ဘယ်မှာ တီးမှာလဲ... ကိုကျော်....
မဉ္ဖူ အဆောင် ရှေ့သွားတီးမလို့ ....
ဟာ...ဒါဆို ...အဖော် လိုက်ပေးရအုံး မလား ကိုကျော်...
တစ်ခုခု ဆိုလာ ပြန်လာခေါ် နိူးနော်....
အားမနာနဲ့ကိုကျော်....
အေးပါ ရပါတယ်.... ဂစ်တာကို ကိုင် ရင်း
နောက် တော့မှလာ ပို့ မယ် ကွာ...
ကိုကျော် တစ်ယောက် မဉ္ဖူ အဆောင်ဘက်သို့......
.................နံနက် ၆ နာရီ ခန့်တွင်...
..........ဒေါက် ...ဒေါက် .....
ဟာ .... ကိုကျော် ...အစောကြီးပါ လား....
နောက် မှ လာပို့လဲ ရပါတယ်...
.... မဟုတ် ဘူး ...ငါ အခုမှ ပြန် လာတာ....
............. ဟာ .......
...မဉ္ဖူ အဆောင်က ကောင် မ လေးတွေ မျက်နှာ သစ် ရင်း
ငါ ကို ....နေ .. ဘက် လက်ညှိုး ထိုးပြ တော့ မှ...
နံနက် အလင်းလာတာတွေ့လို့ 
ငါ ပြန် လာတာ....
ဟာ ....ကိုကျော် တို့ ကတော့ မိုးလင်းအထိ ဂစ်တာ တီးလာတာပေါ့...
အေး..... ငါပြန်အိပ် ...လိုက် အုံး မယ်...
........( နေမျိုဆေး သီချင်း... နေပါစေ... အမြဲတမ်း ဆိုတတ်သော ....အခုဆို MOGE တွင် ရေနံအရာရှိ ဖြစ်နေ သည့်
ကိုကျော် သို့အမှတ်တရ... )
Posted by ငဝန်နဒီ at 2:14 PM No comments:
ပျောက်သူ နဲ့ဖျောက် သူ
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် တစ်ချို့ တွေ နိုင်ငံတကာမှာ မိမိလူမျိုး ကို မပျောက်စေချင်ပေမဲ့ ပျောက်အောင် အလုပ်ခံနေရတယ်...ဒါဟာနားလည် ပေးလို့မရမဖြစ် ရနေရတယ်...
တစ်ချို့ တစ်ချို့ကျတော့ မြန်မာ မိဘ နှစ်ပါးကမွေးတဲ့ ကလေး က မြန်မာ စကား လုံးလုံး မတတ် တာတော့
မိမိလူမျိုး ကိုဖျောက်တာ သေချာတာပေါ့...
ကဲ သင်ရော မိမိလူမျိုး ကို အပျောက် ခံနေရသူလား.....
မိမိလူမျိုး ကို မိမိကိုယ်တိုင် ဖျောက် နေတယ်သူလား....
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ.....ပျောက်သူ ဖြစ်ချင် ဖြစ်ပါစေ... ဖျောက် သူ မဖြစ်ရင် တော်တော်အဆင်ပြေမှာပါ....
Posted by ငဝန်နဒီ at 11:01 AM No comments:
မောင်သောင်းဒီး ဂျပန်စက္ကူအရုပ်ချိုးပြိုင်ပွဲ တတိယ ဆု ရရှိသည်...
ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့အနီး မာကူဟာရီဒေသရှိ စက္ကူလေယာဉ်ပျံ ပြိုင်ပွဲတွင် မောင်သောင်းဒီး တတိယ ဆု ရရှိသည်...
မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဇာတိ မိဘ ၂ပါးက မွေးဖွားခဲ့သော မောင်သောင်းဒီးသည် နိုင်ငံမဲ့တဦး ဖြစ်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် တရားမ၀င် နေထိုင်စဉ် မောင်သောင်းဒီးကို မွေးဖွားရာ မွေးစာရင်း မရှိသဖြင့် နိုင်ငံ မဲ့နေခြင်း ဖြစ်သည်။
ပြိုင်ပွဲကို All-Japan Origami Airplane Contest ဟု အမည် ပေးထားသည်။
သူ့အား ဂျပန်သို့ သွားရောက်ခွင့် ပြုမပြုကို ရက်အနည်းငယ်အကြာ အငြင်းအခုန် ပြုလုပ်ပြီးနောက် ထိုင်းအစိုးရက နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မောင်သောင်းဒီးသည် မြန်မာ မိဘ ၂ပါးက မွေးဖွားခဲ့ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုပြီး သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်နေခြင်းဖြစ်သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့ စက္ကူလေယာဉ်လွှတ်ပြိုင်ပွဲမှာ ထိုင်းနိုင်ငံကိုယ်စားပြု ယှဉ်ပြိုင်ပြီး တတိယဆုရခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား မိဘတွေက ဖွားတဲ့ မောင်သောင်ဒီကို ထိုင်းသိပံ္ပနဲ့ နည်းပညာဌာနက ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့် လိုက်ပါတယ်။ ခုလို ထူးထူးချွန်ချွန် ဖြစ်မှုဟာ ကျန်တဲ့ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့ ကလေးငယ်တွေအတွက်လည်း နမူနာကောင်း တခုပဲလို့ မြန်မာ နိုင်ငံသားတွေက ပြောဆိုကြပါတယ်။ အခြေနေကိုမေးမြန်းထားတဲ့ VOA ထိုင်းအခြေစိုက်သတင်းထောက် ကိုကျော်ထင်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံကိုယ်စားပြု ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ အသက် (၁၂)နှစ်သား မောင်သောင်ဒီဟာ ဒီကနေ့ နေ့လည်ပိုင်းမှာ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါတယ်။ သူ့ကို ထိုင်းသိပံ္ပနဲ့ နည်းပညာဌာနက သီးခြားဂုဏ်ပြုတဲ့ အစီအစဉ်တခုကိုလည်း ဒီညနေပိုင်း မှာ ပြုလုပ်မယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီနေ့လယ်ပိုင်း လေယာဉ်ကွင်းမှာ စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ ဖခင် စိုင်းညွှန့်က ခုလိုပြောပြပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့ လေယာဉ်ကွင်းမှာ မောင်သောင်ဒီကို စောင့်နေကြပါတယ်။ သူ့ အနာဂတ် ရှေ့ကိုတော့ ဘာမှ တွေးမထား သေးပါဘူး။ ခုလိုဆုရတဲ့အတွက် ၀မ်းသာတယ်ဆိုတာပဲ ပြောချင်ပါတယ်။”
မောင်သောင်ဒီဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့က တိုကျိုမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အိုရီဂါမီ စက္ကူ လေယာဉ် လွှတ်ပြိုင်ပွဲမှာ ၁၀.၅၃ စက္ကန့်အကြာ လေထဲ ၀ဲအောင် လွှတ်တင်နိုင်တဲ့အတွက် တတိယဆု ရခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုရခဲ့တဲ့ စံချိန်ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ က သူကိုယ်တိုင် တင်ထားခဲ့တဲ့ စံချိန်ထက် ၂စက္ကန့်နီးပါး လျော့နည်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဆရာမ ၀ီရတ်ချနီးက တပည့်တယောက် ခုလို ထွန်းထွန်းပေါက်ဖြစ်လာတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
"၀မ်းသာတယ်။ ပီတိဖြစ်မိတာပေါ့။ ကိုယ်တပည့်က ထိုင်းနိုင်ငံကိုယ်စား ထူးထူးချွန်ချွန် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ အတွက် သူ့ကို ထိုင်းနိုင်ငံအတွက် လူတော်လူကောင်း တယောက် ဖြစ်လာစေချင်တာလို့ ပြောသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ”
သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာ ကျန်တဲ့ မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားတွေရဲ့ ခလေးငယ်တွေ အတွက်လည်း စံနမူနာကောင်း တခုဖြစ်တယ်လို့ ရှမ်းအမျိုးသမီးရေး လှုပ်ရှားမှု ကွန်ယက်အဖွဲ့ဝင် မခမ်းယုံက ပြောပါတယ်။
“၀မ်းသာတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူမသွားခင်ကတည်းကလည်း အရမ်းပဲ စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ပေါ့နော်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ သူလည်း ဒီဂိမ်းသွား ပြိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတာ သွားနိုင်လား.. မသွားနိုင်လား အများကြီးရင်ဆိုင်ရတယ်လေ။ သူ့အခက်ခဲ အများကြီးရှိတယ်။ သူတယောက်တည်းနဲ့ ရုန်းကန်ဖို့ဆိုတာ လွယ်တဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း သူ့ဆရာမအနေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ လူကြီးတွေနဲ့ အများကြီး သူ့ကို အထောက်အကူ ပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာ ကျွန်မတို့လည်း အများကြီး ၀မ်း သာ အားရရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ အခုလည်း သွားပြိုင်ခဲ့ပြီးပြီ။ တတိယရခဲ့တဲ့အပေါ် အရမ်းဝမ်းသာတယ်။ မျှော်လင့်နေတယ်။ ကျွန်မတို့ Migrant ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ အနာဂတ်အတွက်လည်း ဒီထက်ထူးချွန်တဲ့လူတွေ များများ ထွက်ပေါ်လာ အောင် နမူနာကောင်းတွေပေါ့နော်”
မောင်သောင်ဒီရဲ့ပြိုင်ပွဲကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက်အားပေးခဲ့သူတယောက်က မြန်မာနိုင်ငံ သားတယောက်နေနဲ့ ထိုင်း ကိုယ်စားပြုသွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှုအပေါ် သူ့အမြင်ကို အခုလိုပြောပြပါတယ်။
“ထိုင်းဘုရင်နဲ့ ဘုရင်မပုံကိုကိုင်ထားပြီး အဲဒီမှာ ထပ်ပြီး လေ့ကျင့်ဖို့အတွက် ထိုင်ပြီး တန်းစီနေရတာပေါ့နော်။ ကိုယ့်ဗမာ လူမျိုး၊ ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ ကိုယ့်လူမျိုးဖြစ်ပါလျက်နဲ့ သူများနိုင်ငံကိုယ်စားပြုပြီး သူများရဲ့စာအုပ်ကလေးနဲ့လာပြီး ဒီပြိုင်ပွဲကို ၀င်ရောက်နိုင်ခွင့်ရတဲ့အတွက် အလွန်တရာမှကြေကွဲရင်း အလွန်တရာ ဂုဏ်ယူရပါတယ်။”
စောစောပိုင်းတုန်းကတော့ ထိုင်းပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနဟာ မောင်သောင်ဒီကို ယာယီပတ်စပို့ ထုတ်ပေးဖို့ ငြင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့ ၀န်ကြီးချုပ် အဘီဆစ် ၀က်ချာချီဝ က ခရီးသွားလာခွင့်ပြု လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။
ယနေ့လွတ်မြောက်လာသူများထဲတွင် ထင်ရှားသော သရုပ်ဆောင် နှင့် နာဂစ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင် ခဲ့သူ ကိုဇာဂနာ လွတ်မြောက်လာပြီဟု သိရပါသည်။
နာဂစ် ကူညီရေးလုပ်ငန်းများကို တက်ကြွစွာဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၄င်း၏ ပြတ်သားထိရောက်စွာ ဝေဖန် ပြောဆိုမှုများကြောင့် အီလက်ထရောနစ်အက်ဥပဒေ၊ နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေးနှင့် ဗီဒီယို အက်ဥပဒေများဖြင့် အမှုဆင်ကာ ထောင်ဒဏ် ၄၅ နှစ် ချမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။
ကိုဇာဂနာနှင့်အတူ အမှုတွဲ ဖြစ်သော ကိုဇော်သက်ထွေး နှင့် အခြားသူများလည်းပါသည်ဟုသိရပါသည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 11:38 AM 1 comment:
မောင်သောင်းဒီး ဂျပန်မှာ ပြိုင်ပွဲဝင်နေပြီ
စက်တင်ဘာ ၁၉၊ ၂၀၀၉
ယနေ့ ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့အနီး မာကူဟာရီဒေသရှိ စက္ကူလေယာဉ်ပျံ ပြိုင်ပွဲတွင် သူ၏ လေယာဉ်ကို လေထဲတွင် ကြာနိုင်သမျှ ကြာအောင် ပျံဝဲနိုင်စေရန် လွှတ်တင်တော့မည့် မောင်သောင်းဒီး (Mong Thongdee)။
ပြိုင်ပွဲရလဒ်များ ချက်ချင်း မသိရသေးပေ။ ပြိုင်ပွဲကို All-Japan Origami Airplane Contest ဟု အမည် ပေးထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဇာတိ မိဘ ၂ပါးက မွေးဖွားခဲ့သော မောင်သောင်းဒီးသည် နိုင်ငံမဲ့တဦး ဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် တရားမ၀င် နေထိုင်စဉ် မောင်သောင်းဒီးကို မွေးဖွားရာ မွေးစာရင်း မရှိသဖြင့် နိုင်ငံ မဲ့နေခြင်း ဖြစ်သည်။ သူ့အား ဂျပန်သို့ သွားရောက်ခွင့် ပြုမပြုကို ရက်အနည်းငယ်အကြာ အငြင်းအခုန် ပြုလုပ်ပြီးနောက် ထိုင်းအစိုးရက နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မောင်သောင်းဒီးသည် ထိုင်းနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုပြီး သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်နေခြင်းဖြစ်သည်။
( ဓာတ်ပုံ - AP )
Posted by ငဝန်နဒီ at 11:51 AM No comments:
ပထမဆုံး Blog ကို Login ၀င်ဗျာ ...
၀င်ပြီးရင် Posting, Setting, Layout တွေ့ရင် Setting ကို နှိပ်ဗျာ ...
နှိပ်ပြီးလို့ Basic, Publishing, ..., Email, OpenID, Permissions ဆိုတာတွေကို တွေ့ရင် Email
ကို နှိပ်ဗျာ ...
နှိပ်ပြီးရင် Mail-to-Blogger Address ဆိုတာတွေ့မယ်ဗျာ ...
သူ့ဘေးမှာ Username.Blank@blogger.com ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်ဗျာ ...
Blank မှာ ကြိုက်တဲ့ စကားလုံးထည့်ဗျာ ... အဲ့စကားလုံးက Secret Word ပဲဗျာ ... ဘယ်သူမှ မသိ
သိတော့ဘာဖြစ်လဲ ... သိတော့ ကိုယ့် Bolg ကိုသူများက ပိုစ့်တင်လို့ ရသွားရောဗျာ ...
Save Setting ကိုလည်းနှိပ် ဖို့ မမေ့နဲ့ဗျာ ...
ပြီးရင် Email ကိုဖွင့် ... To မှာစောစောက ကိုယ်ပေးထားတဲ့ Address (Username.SecretWord@blogger.com) ကိုထည့်ဗျာ ...
Subject မှာ Post Title ကိုထည့်ဗျာ ....
စာရေးတဲ့နေရာမှာ ကိုယ့်ထည့်ချင်တဲ့ ပိုစ့်ကို ရေးဗျာ ...
ပုံတွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေ ထည့်ချင်ရင် ရိုးရိုး ပိုစ့်တင်တုန်းက အတိုင်းပဲ လင့်တွေထည့်ဗျာ ...
ပြီးရင် Send ကိုနှိပ်ဗျာ ...
ပြီးရင် Blog ကိုသွားကြည့်ဗျာ ...
ဗြိတိန် တွင် ပညာသင်မည့်သူများ အတွက် သံရုံးက လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာ ကျောင်းသားဗီဇာထုတ်ပေးနေ
၁၄ စက်တင်ဘာ ရန်ကုန် ၊ ၊ဟိန်းခိုင်ထွန်း
No Worries for British Student Visa
ဗြိတိန် နိုင်ငံတွင် သွားရောက်ပညာသင်ကြားမည့် သူများအတွက် ရန်ကုန်မြ်ို့ ရှိဗြိတိသျှ သံရုံးမှ စက်တင်ဘာလဆန်းပိုင်းမှ စ၍ ကျောင်းသားဗီဇာ များကို လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာထုတ်ပေးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
လိုအပ်သည့် ပညာ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များ နှင့် ဗြိတိန် ရှိ တက္ကသိုလ် နှင့် ကျောင်းများမှ ခေါ်စာများပါလျှင် ယခင်လို ကောင်စစ်ဝန်မှ တွေ့ ဆုံမေးမြန်းမှု မျိုးပင်မရှိတော့ ပဲ လွယ်ကူစွာဗီဇာထုတ်ပေးနေသည် ဟု ဗြိတိန်ရှိ မစ်ဒယ်ဆက် တက္ကသိုလ် တွင် ပညာဆက်လက် သင်ကြားမည့် တစ်ဦးက Freedom News Group သို့ ပြောသည်။
ဗီဇာကြေး နှင့် လိုအပ်သည့် အထောက်အထားများပါရှိပါ က သံရုံးမှ နေ့ တွင်းခြင်းပင် ဗီဇာထုတ်ပေးသည် ဟု သိရသည်။ယခုကဲ့သို့ သံရုံးမှ ကျောင်းသားဗီဇာ လွယ်ကူစွာထုတ်ပေးခြင်းကြောင့် ယခင် IELTS အမှတ်ပြည့်မှီပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကျောင်းသား
ဗီဇာ မရရှိသေးသူများမှာ ဗီဇာရရှိ ရန် ပြန်လည် ကြိုးပမ်းကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်အစိုးရလက်ထက် ပညာရေး စနစ် နိမ့်ကျညံ့ဖျင်းသောကြောင့်မြန်မာလူငယ် အချို့ မှာ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များတွင် သွားရောက်ပညာသင်ကြားရန် စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။
INF5ဆိုသည့် တရားဝင်နေထိုင်၍ ပညာသင်ကြားခွင့် ကျောင်းသားဗီဇာရရှိရန် လျှောက်ထားသူများသည် သံရုံးမှ သတ်မှတ်ထားသောနေရာများတွင် ကျန်းမာရေး အထောက်အထား တစ်ပါတည်းယူဆောင်သွားရန် လိုအပ်သည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 12:38 PM No comments:
သူငယ်ချင်း သန့် ဇင်သန်း တိုကျို (အိုဒိုင်ဘာ) ရောက် စဉ်
Posted by ငဝန်နဒီ at 7:46 PM No comments:
မိုင်းနင်း အင်ဂျင်နီယာမေဂျာ ရောက်ရခြင်း အကြောင်း
ကျွန်တော် ရယ် အောင်ကျော်လင်းရယ် လှမြင့် ရယ်ထိုင်နေရင်း
လှမြင့် က မင်းတို့ တွေပြောကွာ
ဘယ်မေဂျာ ရွှေးရင် ကောင်းမလဲ လို့ ...
မင်းဘာမှ မပူပါနဲ့ ။ အဝီစိသွားရင် တူးထုတ်ပြီးကယ် ဖို့ ကတော့ ကူညီပေးမယ်
ရေနံအင်ဂျင်နီယာ မေဂျာယူထားတဲ့သူက ကူညီရမှာပေါ့...
တာဝတိံသာရောက်ရင် မပူနဲ့လာခေါ်ဖို့အသင့်ပဲ....
လေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာ မေဂျာ ယူထားတဲ့ သူကလုပ်ပေးရမှာပေါ့....
အင်း ....စဉ်းစားအုံး မယ်ကွာ.....
ကျွန်တော် နှင့် အောင်ကျော်လင်းအားတွေ့ လျှင်...
မင်းတို့ တွေပြောတာ သတိရလို့အခု
မိုင်းနင်း အင်ဂျင်နီယာမေဂျာ ကို ပဲ ရွှေး လိုက်တယ်...
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော. မင်းတို့ အင်ဂျင်နီယာမေဂျာတွေ က တာဝတိံသာ လဲ သွား မရ
အဝီစိ လဲ သွားမရ..ဆိုတော့...
အခု မိုင်းနင်း အင်ဂျင်နီယာမေဂျာ ဆိုတော့... မြေကြီး မှာပဲ.. . မကောင်းဘူးလား....
(မိုင်းနင်း အင်ဂျင်နီယာနှင့်ကျောင်းပြီးသော လှမြင့် နှင့် လေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာနှင့်ကျောင်းပြီးသောအောင်ကျော်လင်း.... ကတုံးအားအမှတ်တရ...)
Posted by ငဝန်နဒီ at 10:27 AM No comments:
စင်ကာပူ မှ ရန်ကုန် ပြန်လျှင် MAI မှ S$299
အမ်အေအိုင်လေကြောင်း ဗုဒ္ဓဂါယာသို့ ပြေးဆွဲမည်
အမ်အေအိုင်လေကြောင်း ရန်ကုန် မှ ဂါယာသို့ ပြေးဆွဲမည်
one way US$ 246
Round trip US$ 356
8M601 Yangon (RGN) GAYA (GAY) 09:00 10:30 25 Oct 2009 to 27 Mar 2010 (Wed, Sat)
8M602 GAYA (GAY) Yangon (RGN) 11:30 15:00 25 Oct 2009 to 27 Mar 2010 (Wed, Sat)
Seven cool homes that float
Posted Mon Aug 31, 2009 10:34am PDT
Related topics: Recycling, Buildings, House More from The Daily Green News blog .
The following isaguest post from moneycompare.com.au.
Gone are the days when houseboats were pokey little barges, all ofasimilar design. Today, you can find some truly amazing, designer floating homes inavariety of different shapes and sizes. Many are eco-friendly while offering the style-conscious homeowneraunique living space.
Here we present seven really cool floating homes:
This elegant houseboat, designed by German architects Confused-Direction, is ideal for those looking foracompact, stylish, and environmentally friendly floating home. Built using reclaimed wood from an old farmhouse and other sustainable building materials, the green roof adds to the eco-friendly appeal. The simple-yet-sleek interior design offers all the conveniences you could want and is thoroughly modern and unique. The Schwimmhaus was designed to float around or to stay docked permanently.
As with most architectural designs coming out of Dubai, this houseboat is simply stunning. The 220-square-meter home was cleverly designed by Dubai-based architectural firm X-Architects. Set on two catamaran beams, this two-story structure is practically encased solely in glass windows, allowing sunlight to flood the interior. It'll take the average person more thanafew bank loans to get their hands on the swish fittings and up-market features of this chic and spacious floating home, even if it's just to rent foraweek!
(Photo: Covey Island Boatworks)
The term "really cool" takes on new meaning with this amazing houseboat, developed specifically for the Arctic winter. Inspired by the Inuit practice of turning their hunting boats upside down for winter shelter, the builders of this unique structure -- Covey Island Boatworks -- took the idea toanew level by creatingaprefabricated, highly insulated home that can endure harsh climates. Equipped with solar, wind, and marine power systems, this self-contained unit can be placed virtually anywhere. The interior is cozy and compact and contains all the modern conveniences most people crave.
(Photo: Mark Kingsley Architects)
Environmentally conscious, UK-based Kingsley Architects have reinvented caravan holidays with these unique and eco-friendly solar-powered houseboats. Apparently, the ingenious design enables the structure to be totally self-sufficient for up toayear atatime. It can also be docked atafloating home community to utilize the site's power, fresh water, and sewage treatment facilities. Similar in design toacamper van, this 75-square-meter houseboat has an open kitchen and living area space with enclosed sleeping areas in the back.
(Photo: Vladimir Plotkin / Archstoyanie)
This completely unique design by Russian architect Vladimir Plotkin was created for the 2008 Archstoyanie Summer Festival in Russia, where the theme was Noah's Ark. A rather odd-looking structure, the giant disc-like living space is suspended aboveafloating platform and is accessed via ladders. The interior is very compact, but by no means claustrophobic. The lattice walls ensure constant ventilation and the large portholes provide ample natural light.
This extraordinary home certainly gets tongues wagging. Once owned by Howard Hughes, the 1930's Boeing 307 Stratoliner was converted intoahouseboat and is nowafamous tourist attraction in Fort Lauderdale. Surprisingly roomy inside, it housesasmall sleeping area and bathroom at the rear of the aircraft, while the main hull is dedicated to living space that featuresalarge bar area and evenaPC workstation.
Indian Luxury Houseboat
This beautiful houseboat is an ideal holiday home for those wishing to explore southern India without having to change hotels onaregular basis. This two-bedroom, three-bathroom luxury houseboat is fully air-conditioned and even hasaJacuzzi on board. All the crew are English-speaking, and there isachef aboard to whip up amazing gourmet meals. Whatawonderful way of seeing the rural area of Kerala!
From the staff of moneycompare.com.au
Posted by ငဝန်နဒီ at 10:59 PM No comments:
၉ သီချင်းခွေကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၉ လပိုင်း ၉ ရက်နေ့တွင်ထွက်ပြီ။
၉- ၉-၉-၀၉......၉ လေးလုံးပေါ့။
Posted by ငဝန်နဒီ at 9:59 AM No comments:
စင်ကာပူ တွင် လိမ် စားသူ မြန်မာအမျိုးသမီး နှင့် ကုပ္မဏီ
ဒေါ်ခင်ခင်ထက် ( ခ ) Lilian Smith @ ဒေါ်လှလှမြင့် 
Tanjong Pagar Cantonment Towers.
Blk 13 # 30-29
ယခုအမျိုးသမီးသည် မြန်မာများကို အလုပ်ရှာပေးမည် ဟုဆိုကာပိုက်ဆံတောင်းပြီးသူဌေးနှင့် ပေါင်းကာ မြန်မာများအားပြန်လည်အလုပ်ဖြုတ်ပြီး ငွေကိုလိမ်လည်စားနေပါသည်။ မြန်မာများဘက်မှကာကွယ်လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိပါ။
ဤအမျိုးသမီး ဖြင့် အလုပ်ရှာခိုင်းသောမြန်မာမိန်းခလေး နှင့် ယောင်္ကျားလေးများအလွန်ပင်ဒုက္ခရောက်ရပါသည်။ ဤအမျိုးသမီးသည်
ထို့ အတွက်ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းများ သိသင့် သိထိုက်သောစင်ကာပူက အမျိုးသမီးအကြောင်းကို ပြောပြလိုက်ရပါသည်။
ဤစာကိုဖတ်ပြီးသောသူငယ်ချင်းများ တစ်ခြားမိမိတို့ ရဲ့ သူငယ်ချင်းများထံသို့ စာများကို ဖြန့် ဝေပေးချင်းနှင့် ကူညီပေးကြပါခင်ဗျာ။
မြန်မာအချင်းချင်းဂုတ်သွေးစုတ်နေတဲ့ မြန်မာတွေကို စာဖြန့် ဝေသောအနေဖြင့် ကူညီပေးကြပါခင်ဗျာ။
ယခုအမျိုးသမီးသည် အမှန်တကယ်ကျွန်တော် ၊ ကျွန်မတို့ ထံမှစင်ကာပူငွေကိုလိမ်လည်သွားပါသည်။မူလစာရေးပြီးသတိပေးချိန်နောက်ကျသွား၍ ကျွန်တော်ကျွန်မ
ငွေလိမ်ခံလိုက်ရပါသည်။ ဤအမျိုးသမီးသည် အထက်ပါစာအတိုင်းကျွန်တော်ကျွန်မတို့ ထံမှငွေကိုလိမ်ယူကာ ၊ အဆက်အသွယ်ဖျက်ပြီး ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ကိုစင်ကာပူမှာနေသည့်STAYမကုန်မချင်းကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်ကာထားရှိပါသည်။သူမထံအကြိုးအကြောင်းဖုန်းဆက်သော်လည်းဖုန်းမကိုင်ပဲနဲ့ သူမ၏ မိတ်ဆွေထံမှ ဖုန်းဆက်လာပြီးဖြစ်ပျက်နေသောပြဿနာများကိုဖြေရှင်းခြင်ယောင်ဆောင်ပြီး ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ အားခြိမ်းခြောက်ခဲ့ ပါသည်။ သူတို့ က စင်ကာပူမှာနေတာ ၁၅ နှစ်ရှိပြီ
ငါတို့ လုပ်ရင်နင်တို့ ခွေးပြေးဝက်ပြေး နဲ့ ပြန်သွားရလိမ့် မယ်ဟုရိုင်းစိုင်းစွာ တယ်လီဖုန်းဖြင့် ပြောဆိုဆက်ဆံခဲ့ ပါသည်။ သူတို့ တစ်သိုက်က စင်ကာပူမှာနေတာ ၁၅ နှစ်လုံးလုံးမြန်မာဘယ်နှစ်ယောက်ကိုလိမ်စားနေလဲဆိုတာကျွန်တော်ကျွန်မ တို့ မသိရတာအမှန်ပါ။ သူတို့ နှင့် အတူပေါင်း ပြီးစင်ကာပူနိုင်ငံသားသူဌေးတစ်ဦးလည်းပါပါသေးတယ်။ အဲ့ ဒီသူဌေးက မြန်မာမိန်ကလေးများကိုမတရား တစ်နေ့ ကို အလုပ်ချိန် ၁၂ နာရီခိုင်းပြီး တစ်လလုံးပိတ်ရက်မရှိပဲအလုပ်လုပ်ကိုင်နေရပြီး အင်တာဗျူးတုံးကပြောထားတာလစာက S$ ၁၀၀၀ လို့ ပြောထားပြီး တကယ်တန်းလစာထုတ်တော့S$ ၃၁၅ပဲရပြီးအရမ်းကိုဒုက္ခရောက်နေကြရပါတယ်။ အလုပ်ရှင်ကနည်းမျိုးစုံသုံးကာ ပိုက်ဆံကိုဖြတ်တောက်ယူပါတယ်။
အလုပ်ကထွက်ချင်ရင်လည်းသူတိုမတရားလက်ဗွေနှိပ်ထားတဲ့့အတွက်ပိုက်ဆံလျှော်ပေးရမှာဖြစ်ပြီး လျှော်ရမဲ့ ပိုက်ဆံက S$၁၀၀၀၀
ဖြစ်တော့ တော်တော်ကိုအခက်အခဲတွေ့ နေကြရပါတယ်။နောက်ပြီး အဲ့ ဒီသူဌေးနဲ့ အတူမြန်မာပွဲစားများက S' pass နှင့် အလုပ်ရမည်ဟုဆိုပြီးပိုက်ဆံတောင်းကာ၆ရက်တစ်ပါတ်နှင်အလုပ်ထုတ်ကာနောက်တစ်ယောက်အားထပ်မံတောင်းယူလိမ်လည်ပြန်ပါတယ်။ သူဌေးရဲ့ ကုပ္မဏီလိပ်စာကတော့ ..............
HONG HUANG TRADING & THREE STARS TRADING CO
55 KAKI BUKIT INDUSTRIAL TERRACE
Phone -- 67483833
အမှန်တကယ်ခံစားရတဲ့ ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ ကိုကူညီသောနေဖြင့် ဤစာကိုထပ်မံဖြန့် ဝေပေးကြပါခင်ဗျာ။ မြန်မာနိုင်ငံသာအချင်းချင်း
ကလိမ်ကကျစ်လုပ်ကာနိုင်ငံခြားသားနဲ့ ပေါင်းပြီးဂုတ်သွေးစုတ်နေသော်မြန်မာအမျိုးယုတ်တွေ နောက်ထပ်လိမ်လည်စားသောက်လို
Posted by ငဝန်နဒီ at 3:34 PM 1 comment:
အမျိုးသမီးများ၏ မလုံမခြုံ ခန္ဓာပုံများ ခိုးရိုက်သူ ထောင်ကျ
အမျိုးသမီး ၂၀ ခန့်၏ ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကို မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် ခိုးရိုက်ကူးခဲ့သူဟု စွပ်စွဲကာ မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦးကို ထောင်ဒဏ် သီတင်းပတ် ၁၂ ပတ် အပြစ်ပေးလိုက်သည်ဟု စင်္ကာပူ နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာ The Straits Time ၏ ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ရေးသားထားသည်။
၂၇ နှစ်အရွယ် ကိုချစ်စမ်းမောင်ဆိုသူသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလမှ ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း အမျိုးသမီး ၃ ဦး၏ ပုဂ္ဂလဘဝကို နှောင့်ယှက်လွန်ကျူးမှု (၃) မှု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်ဟု သတင်းစာက ရေးသားထားသည်။
ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့က SUN ပလာဇာတွင် ဓာတ်ပုံခိုးရိုက်နေစဉ် ၃၃ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီး၏ ခင်ပွန်းသည်က လက်ပူးလက်ကြပ် ဖမ်းမိခဲ့သည်ဟု ပါရှိသည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးချက်များအရ အလားတူ ရိုက်ကူးမှုများလည်း ယခင်က ပြုလုပ်ခဲ့ဖူးကြောင်း တွေ့ရှိရသည်ဟု သတင်းစာတွင် ဆက်လက် ရေးသားထားသည်။
တရုတ်လူမျိုးတွေ ဖြစ်တဲ့ အတွက် မြန်မာပြည်ကို မပြန်ချင်ကြောင်း
''မြန်မာနိုင်ငံ ကိုးကန့်နယ်မြေက တိုက်ပွဲတွေကြောင့် တရုတ်ပြည်ဖက်ကို ဒုက္ခသည်အဖြစ် ရောက်ရှိနေကြသူတွေထဲက တချို့က မိမိတို့ဟာ တရုတ်လူမျိုးတွေ ဖြစ်တဲ့ အတွက် မြန်မာပြည်ကို မပြန်ချင်ကြောင်း တရုတ်အာဏာပိုင်တွေကို တင်ပြကြတယ် ''
Posted by ငဝန်နဒီ at 1:16 PM No comments:
တရုတ် ရှင်ဂျန်းပြည်နယ် လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်း ထပ်ဖြစ်
ဟန်တရုတ်လူမျိုး ဆန္ဒပြသူများနှင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ အူရုမ်ချီမြို့တွင် ရင်ဆိုင်တွေ့နေကြစဉ်။
စက်တင်ဘာ ၃၊ ၂၀၀၉။
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းက ရှင်ဂျန်း (Xinjiang) ဒေသ လမ်းတွေပေါ်မှာ ဆန္ဒပြသူတွေ စုဝေးနေကြပါတယ်။ ရာနဲ့ချီတဲ့ လူတွေကို ဆေးထိုးအပ်တွေနဲ့ လိုက်ထိုးတဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဖြစ်အပြီးမှာ ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ လုံခြုံမှုမရှိဘဲ နေနေကြရတယ်လို့ ဆန္ဒပြသူတွေက ပြောကြပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံး တိုင်းရင်းသားအုပ်စုဖြစ်တဲ့ ဟန်တရုတ်လူမျိုးတွေ အများဆုံးပါဝင်တဲ့ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေဟာ အူရုမ်ချီ (Urumqi) မြို့ထဲမှာ ချီတက်နေကြပြီး သူတို့ကို လုံခြုံရေး အကာအကွယ်တွေ ပိုပေးဖို့ ရှင်ဂျန်း အာဏာပိုင်တွေကို တောင်းဆိုနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရှင်ဂျန်းဒေသ ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ၀မ်လီကွမ်ကတော့ ဆန္ဒပြသူတွေကို ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း လုပ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းထားတယ်လို့ ဆင်ဟွာသတင်းဌာနက ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဆန္ဒပြ လူအုပ်ကြီးကတော့ ဥက္ကဋ္ဌ ၀မ်လီကွမ်ကို ပြစ်တင်ရှုတ်ချပြီး ဒေသအာဏာပိုင်တွေ နုတ်ထွက်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်အတွင်း လူပေါင်း ၄၇၆ ယောက်ဟာ ဆေးထိုးအပ်သုံး အကြမ်းဖက်သူတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကို ခံခဲ့ကြရတယ်လို့ သတင်းတွေက ဆိုပါတယ်။ အဲဒီ ဆေးထိုးအပ်နဲ့ အထိုးခံခဲ့ရသူတွေထဲမှာ အဆိပ်သင့်တာနဲ့ မူးယစ်ဆေးအာနိသင် ပြတာတွေတော့ မတွေ့ရဘူးလို့ ဆရာဝန်တွေက ပြောပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မသင်္ကာသူ ၂၁ ယောက် အဖမ်းဆီး ခံထားရတယ်လို့ ဆင်ဟွာသတင်းဌာနက ဖော်ပြထားပါတယ်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 1:10 PM No comments:
ငရဲကြီးရှစ်ထပ်နဲ့ နတ်ပြည် ခြောက်ထပ် ဘုံဘ၀ အစုံပါတဲ့ မြို့တစ်မြို့ကို
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်ကို အထက်စီးက ကြည့်နေတတ်တဲ့
ကြယ်ငါးပွင့် ဟိုတယ်ကြီးတွေမှာ ဒေါ်လာ
၁၅၀တန် ညအိပ်ခန်းတွေ ရှိသလို
တချိန်တုန်းကတော့ အတိတ်ပီပီ ရွှေထီးဆောင်းခဲ့တဲ့ ကာလတွေ
ဒါပေမယ့် အဲဒီ ဈာပနက အဖြူအမည်း ကားချပ်တွေထဲမှာ
ခပ်ဝါးဝါးသာ ဆတွေးနိုင်တဲ့ အခြေအနေ။
ကြွပ်ကြွပ်အိတ်နဲ့ KTVလို့ အဲဒီမြို့သားတစ်ယောက်က နာနာကျည်းကျည်း
မှတ်ချက်ချတယ်။ အသက်အာမခံချက် မရှိသလို ပေါက်ပြဲနေတဲ့ ပလက်ဖောင်းတွေနဲ့
အထူးယာဉ်တန်းတွေအတွက် နာရီပိုင်းအတွင်း လမ်းသစ်တွေ
ခင်းပြတတ်သလို ရက်ပိုင်းအတွင်း သက်တမ်းကုန်တတ်တဲ့ ကတ္တရာလမ်းတွေနဲ့
အခုတော့ ကူးစက်ရောဂါ ထိသွားတဲ့
မိန်းမပျက် တစ်ယောက်လို ဘယ်သူမှ အဆက်အဆံ မလုပ်ချင်တော့ဘူး။
စလုံး၊ ဂငယ်ကုန်းအထိ ခြေဆန့်သွားခဲ့တဲ့ သူ့မြို့သားတွေကတောင် ၀လုံးလို့
မြို့အင်္ဂါရပ်တွေထဲမှာ လျှပ်စစ်မီး ရှိရမယ်၊
သန့်ရှင်းရေးစနစ် ရှိရမယ်၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ရှိရမယ်၊
သောက်သုံးရေ သန့်ရှင်းစွာ ရရှိရမယ်၊ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနဲ့ ဖက်လှဲတကင်း
ဖြစ်ရမယ် အဲဒီိလို တစ်ယောက်ယောက်က ပြောခဲ့ရင် သူဟာ မြို့တစ်မြို့
ဒါပေမယ့် လူဦးရေ ခြောက်သန်းကျော်ဟာ သူ့ရင်ဘတ်ထဲမှာ
ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတွဲတွေ ရှိနေသလို တစ်ယောက် ကိုယ်ငွေ့ တစ်ယောက်
ပြန်ချုံလို့ ရတဲ့ မြို့သစ်တဲစုလေးတွေလည်း ရှိနေတယ်လေ။
လေးတိုင်စင်ဝါးခင်းကို ကမ္ဘာဆန်မှုက ထောက်ကူပေးထားတဲ့ ပလတ်စတစ်
ရွက်ဖျင်စတွေလည်း လွယ်လွယ်ကူကူ ၀ယ်လို့ရတယ်လေ။ ရာသီဥတု သာတောင့်သာယာ
ဆိုပေမယ့် ချူချာတတ်တဲ့ ကလေးငယ်တွေလည်း ရှိနေတတ်တဲ့မြို့။
အရင်ကတော့ နယ်မြို့တွေသွားရင် ရန်ကုန်သားတွေကလေ ဆိုပြီး ပုံပြင်တွေ
အခုတော့ ပတ်စ်စပို့အနီတွေ ထုတ်ထုတ်ပေးပြီး
ပြန်လာတဲ့သူတွေကို ဘာလက်ဆောင်ပါသလဲလို့ စီး စီးမေးတတ်တဲ့မြို့လေ။
အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်က မြေအနေအထားကို မှန်ပြောင်းနဲ့ လှမ်းကြည့်လုိ့ ရသလို
အ၀ီစိသွားတဲ့ အထူးရထားကို လှမ်းတားပြီး အထက်တန်းက တက်စီးလို့ရတဲ့မြို့။
ဟံသာဝတီ ဧကရာဇ် ရာဇာဓိရာဇ် တစ်ယောက် တိမ်းရှောင်ခဲ့ဖူးတဲ့မြို့။
ကြားထဲကနေ သီပေါမင်းတစ်ယောက် ရွှေတိဂုံတက်ဖူးဖို့ ရောက်ခဲ့ဖူးတယ်။
ပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာ ၀ါရှင်တန်မြို့သားတွေ သူ့မြို့ကို ကိုယ်တိုင် ထွက်ကာ
ကွယ်ရသလို ဗိုလ်စိန်မှန်တစ်ယောက် တပ်စိတ်လေးတစ်စိတ်နဲ့ အပျော်တမ်းတပ်၊
တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတပ်တွေနဲ့ အင်းစိန်တိုက်ပွဲမှာ တစ်လက်မချင်း
အဲဒီအချိန်ကလည်း တချို့တွေက ရန်ကုန်ကို
ဟားတိုက်ခဲ့တာပဲ။ ရာဇသင်္ကြန် ဒလက ပြန်တုန်းကလို ဖောက်ပြန်တဲ့
အတွေးမျိုးတော့ ရန်ကုန်က မတွေးခဲ့ရိုးအမှန်ပါ။
တင်ဆက်ပြီးရင် အပြောင်းအလဲကို ညနေစာငတ်သူ တစ်ယောက်လို သူ
မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ သူကိုယ်တိုင် မကျေမနပ်နဲ့။
အချိန်ကာလက ဇရာ ဘယ်လောက်ပြပြ သူသံဝေဂယူလို့ မရဘူး။
အုပ်ထိန်းသူမဲ့တော့မယ့် မြေးငယ်တွေကို သနားတဲ့ အဘွားအိုတစ်ယောက်လိုပေါ့။
ဒါပေမယ့် သူကိုယ်တိုင် ယိုင်တိယိုင်တိုင်နဲ့ဆိုတာ သူသိတယ်။
ရုတ်တရက်ကြည့်ရင် စစ်ပြီးစ မြို့တစ်မြို့လို မုဆိုးမ၊ တစ်ခုလပ်နဲ့
အဝေးရောက် လင်သားတွေ အလုပ်အကိုင်
မြေကွက်အသစ်တွေရိုက်လို့ သူ့မြို့ခံတွေကို နေရာထိုင်ခင်း
အချက်အချာ မြို့လယ်ခေါင် တိုင်းတပါးသား လက်အောက်တွေ
သူက တစ်ခါတစ်ခါ မောင်ချောနွယ် ပြောသလိုလဲ နေတတ်တယ်
`နာကျင်တဲ့အခါ မအော်ဘဲ၊ ပျော်ရွှင်တဲ့အခါ ရယ်မောဖို့ နောက်မကျအောင်
ဗုံးဆံ၊ အမြောက်ဆံကို ကြောက်လို့ ၀ါးရင်းတုတ်နဲ့ရိုက်လည်း
အံကြိတ်ခံ၊ ရိုင်ဖယ်နဲ့ ချိန်ပစ်လဲ အသံသိပ်မထွက်ရဲခဲ့ဘူး။
အခုတော့ ခေတ်နဲ့အညီ သူ့ဆီမှာ ကြေးစားကလပ်အသင်းတွေလည်း ရှိနေပြီ။
လောင်းကစားဒိုင်ကတော့ အရင်ကတည်းက မှိုလိုပွနေတာမို့ သူ့အတွက်
ကမ္ဘာပေါ် ဦးနှောက်ကြီးကြီးတွေ ခေါင်းစားအောင်
ကူးစက်ရောဂါတွေကိုလည်း ဖောဖောသီသီ လက်ခံသလို
အဏုမြူဗုံး ထပေါက်မှာ စိတ်မပူတတ်တော့ဘူး။
ဘယ်လိုကျွေးမလဲ ခေါင်းစားနေရပေမယ့် ညကျရင်တော့ ဘီယာပရိုမိုးရှင်းတွေနဲ့
လူ့ဘ၀စည်းစိမ်မှာ အဆိုး လောကဓံ လေးပါးကို
အခါးသီးဆုံးညဆိုတာ အချိုမြိန်ဆုံး မနက်ဖြန်လို့
တဘောင်လိုလို ငကြောင်လိုလိုနဲ့ မူး မူးပြီး ထပြောတတ်တဲ့မြို့။
မြေပုံတလွဲကြီးနဲ့ ရတနာတွေ ရှိရာဆီ သွားမယ်လို့ အရူးတွေ ဆော်သြပြီး
နောက်ဖေးပေါက်က ပြန်တက်၊ သူများ ညစာတွေ ခိုးခိုးစားတတ်တဲ့ အရူးတွေ
မြို့တစ်မြို့ရဲ့ ဂုဏ်ထူးတွေထဲမှာ မိန်းမပျက်နဲ့
အကျဉ်းထောင် အကြောင်းတွေပါရင် Grade(A) ရနိုင်မယ့်မြို့လေ။
အမှန်အကန်ဆိုရင်တော့ နံရံလေးဘက် ပိတ်ထားတယ်။ အတုတွေ သိပ်များတော့
ရှားပါးတဲ့ အမှန်တရားကို အကျဉ်းထောင်ထဲ ထည့်ထားတာပါလို့ သတင်းထောက်တွေကို
စိတ်ရူးပေါက်ပြီး ရှင်းရှင်းပြ တတ်သေးတယ်။
ဘယ်လောက်တောင်များသလဲဆိုတော့ ခင်ဗျား မြင်မြင်သမျှ အကုန်အတုကြီးပဲ။
ဆေးဝါးအတု၊ ပွဲစားအတု၊ ကားအတု၊ တိုက်အတု၊ လက်ကိုင်ဖုန်းအတု၊ ကွန်ပျူတာ
ဆော့ဖ်ဝဲလ်အတု၊ ဗိုင်းရပ်စ်အတု၊ ပြီးတော့ မျက်နှာအတုနဲ့ လူတွေ၊
တရားရုံးအတု၊ စီရင်ချက်အတု၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာအတု၊ အမွေစား အမွေခံအတု၊
လက်ထပ်စာချုပ် အတုကနေ ဒီမိုကရေစီအတု အထိ။ အတုဆိုရင် အကုန်ရှိနေတတ်တယ်။
ပလက်ဖောင်းပေါ် လမ်းမလျှောက်ပါနဲ့၊ ကြိုက်တဲ့နေရာ အမှိုက်ပစ်ပါ၊
တရားဥပဒေကို လက်တစ်လုံးခြား လိုက်နာပါ၊
မီးပျက်ပျက် မီးလာလာ ဒီဈေးပဲ၊ ဒါဟာ
အခွင့်အရေးတစ်ရပ်။ အဲဒီလို မြင်တတ်ဖို့ မုတ်သုန်ကို လွယ်အိတ်လို လွယ်ပြီး
အသက်အရွယ်မရွေး သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေအတွက်
အလုပ်လက်မဲ့ပေမယ့်လည်း တစ်ယောက် လက်ဖက်ရည် တစ်ယောက် မျှသောက်တတ်တဲ့
လမ်းကြုံရင် လာလည်ပါ။ ညအိပ်စရာ ခက်တဲ့အတွက် မိတ်ဆွေကို တကူးတက ဖိတ်မနေတော့ပါဘူး
ထိုင်းနိုင်ငံဖွား မြန်မာကလေးငယ် ဂျပန် သွားနိုင်ပြီဟုဆို
ကိုယ်တိုင်ချိုးထားသည့် စက္ကူ လေယာဉ်ကလေးနှင့် အတူတွေ့ရသည့် မောင်သောင်ဒီး (ဓာတ်ပုံ - Apichart Jinakul)
.ဂျပန်နိုင်ငံမှ အိုရီဂါမီ စက္ကူခေါက် လေယာဉ်ပျံ ပြိုင်ပွဲသို့ သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရန်အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံဖွား မြန်မာကလေးငယ် တဦးကို ခရီးသွားလက်မှတ် ထုတ်ပေးရန် ထိုင်းအာဏာပိုင်တို့က ယနေ့ ဆုံးဖြတ်လိုက် သည်ဟု ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းစာ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွင် ရေးသားထားသည်။
ဤသို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းကြောင့် ချင်းမိုင်မြို့မှ မူလတန်းကျောင်းသား မောင်သောင်ဒီသည် ယခုလကုန်ပိုင်းတွင် ပြုလုပ်မည့် ဂျပန်နိုင်ငံ အိုရီဂါမီ ပြိုင်ပွဲကို သွားရောက်နိုင်တော့မည် ဖြစ်သည်။
မောင်သောင်ဒီအတွက် ခရီးသွားလက်မှတ် ထုတ်ပေးရန် ၎င်း၏ ကျောင်းမှ တာဝန် ရှိသူများက အပြင်းအထန် ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း ယမန်နေ့ကအထိ ထိုင်းနိုင်ငံ အာဏာပိုင်များက သဘောတူညီခဲ့ခြင်း မရှိပေ။
စက္ကူခေါက် လေယာဉ်ပျံ ပြုလုပ်ရာတွင် ကျွမ်းကျင်သည့် မောင်သောင်ဒီသည် ယမန်နှစ်က ဘန်ကောက်တွင် ပြုလုပ်သည့် ပြိုင်ပွဲတခုသို့ သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရာ သူ၏ စက္ကူခေါက် လေယာဉ်က ၁၂ . ၅၀ စက္ကန့်ကြာ လေတွင် ပျံဝဲနိုင်ခဲ့သည်အထိ စွမ်းရည်ပြသခဲ့သည်။
အိုရီဂါမီ စက္ကူခေါက် လေယာဉ်ပျံ လေတွင် ပျံဝဲနိုင်သည့် ကမ္ဘာ့စံချိန်ကို ဂျပန်အမျိုးသားတဦးက ဧပြီလတွင် ၂၇.၆ စက္ကန့် ဖြင့် စံချိန်ချိုးထားသည်ဟု သိရသည်။
ဂျပန်ပြိုင်ပွဲဝင်မယ့် မြန်မာကျောင်းသား ထိုင်းခရီးသွားလက်မှတ် ရပြီ
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပမယ့် အိုရီဂါမီ (Origami) စက္ကူအရုပ်ချိုးလွှတ် ပြိုင်ပွဲမှာ သွားပြိုင်ဖို့ မြန်မာနွယ်ဖွား နိုင်ငံမဲ့ လူငယ်လေးကို ထိုင်းအစိုးရက ခွင့်ပြုလိုက်ပါပြီ။ အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်ရှိ မောင်သောင်ဒီ ကို ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား မိဘတွေက မွေးဖွားခဲ့တာကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ် မရနိုင် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဘန်ကောက်မြို့က အဲဒီပြိုင်ပွဲမှာ ပထမရ ဗိုလ်စွဲခဲ့တဲ့ မြန်မာလူငယ်လေးက ချင်းမိုင်ကနေ ဘန်ကောက်ကို ပြန်လာပြီး ယာယီ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် လျှောက်ခဲ့ပေမဲ့ ထိုင်းအစိုးရ ပြည်ထဲရေးဌာနက လက်မခံဘဲ ပယ်ချခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ရှေ့နေများကောင်စီက အစိုးရကို တရားစွဲမယ်လို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ အများက ဒီကိစ္စကို အာရုံစိုက်လာကြရပြီး ထိုင်း အစိုးရအဖွဲ့ ၀န်ကြီးများ စည်းဝေးကာ မောင်သောင်ဒီအား ယာယီ ခရီးသွားလက်မှတ် ထုတ်ပေးဖို့ သဘောတူလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အဘီဆစ် ၀ိတ်ချာချီဝ (Abhisit Vejjajiva)ကို သွားရောက်တွေ့ဆုံပြီး ကျေးဇူးတင်စကား ပြောခွင့်ရလိုက်တဲ့ မြန်မာနွယ်ဖွား လူငယ်လေးဟာ ဂျပန်ပြည်မှာ စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နဲ့ ၂၀ ရက်တို့မှာ ပြုလုပ်မယ့် အဲဒီ နိုင်ငံတကာ ပြိုင်ပွဲ မှာ သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရပါလိမ့်မယ်။
ဓါတ်ခွဲခန်းကားဖြင့် အစားအသောက်များတွင် ဆိုးဆေးသုံးမှု ရှောင်တခင်စစ်ဆေး
အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲမှုဌာန (FDA) မှ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ ဈေးကြီးများတွင် ရောင်းချနေသော စားသောက်ကုန်များအား ဓါတ်ခွဲမော်တော်ယာဉ်ဖြင့် စစ်ဆေးနေပြီ ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်တိုင်း လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ ညောင်ပင်လေးဈေးမှ စားသုံးကုန် အရောင်းဆိုင်များမှ ငပိထောင်း၊ စိမ်းစားငပိ၊ ဆော့စ်၊ ငရုတ်သီးမှုန့်နှင့် စားသုံးဆီများကို ယခင်လ ၂၇ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းတွင် စတင်ကာ FDA မှ တာဝန်ရှိသူ ၄ ဦးနှင့် ညောင်ပင်လေးဈေး စည်ပင်မှ ၃ ဦး ပူးပေါင်း၍ စစ်ဆေးခဲ့သည်။
“ညောင်ပင်လေးဈေးကို အရင်အပတ်က စစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ FDA ကတော့ ပြည်သူလူထု စားသောက်တဲ့ အစားအသောက်ထဲမှာ အန္တရာယ်ရှိစေတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ပါမပါ စစ်ပေးတာပေါ့။ အရေးယူဖို့ကြတော့ ဈေးစည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့နဲ့ပဲ ဆိုင်တယ်လေ” ဟု စစ်ဆေးရေးအရာရှိတဦးက ပြောသည်။
စစ်ဆေးနည်းမှာ အစားအသောက်နမူနာ အနည်းငယ်ယူ၍ ဓါတ်ခွဲယာဉ်အတွင်း၌ အသင့်ပါလာသော ကိရိယာဖြင့် နာရီဝက်ခန့်သာ အချိန်ယူရသည်။ ယခုအချိန်အထိ အပြစ်တစုံတရာ ထပ်မံတွေ့ရှိမှု မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
ငရုတ်သီးမှုန့်များတွင် အနီရောင်ဓါတုဆိုးဆေး (Rhodamine B) ပါဝင်ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ယခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် လက်ဖက်နှင့် ငါးပိတို့တွင်လည်း အဝါရောင်ဓါတုဆိုးဆေးများ ပါဝင်ကြောင်း မတ်လက ကြေညာခဲ့သည်။
၎င်းဆိုးဆေးများသည် တာရှည်စားသုံးသူများကို အသည်းနှင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ ကင်ဆာရောဂါတို့ကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်သည့်အပြင် ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားမှုကိုလည်း ထိခိုက်စေသည်။
‘ဆီပျက်နှင့် ပြန်ကြော်ဆီ’ များကို စားသုံးမိသူသည်လည်း ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်ပွားတတ်ကြောင်း FDA မှ တာဝန်ရှိသူက ပြောသည်။
ညောင်ပင်လေးဈေး၌ စစ်ဆေးရာတွင် အန္တရာယ်ရှိသော ဆိုးဆေးများ သုံးစွဲထားသည့် စားသောက်ကုန်အရောင်းဆိုင်များ မတွေ့ရကြောင်း FDA နှင့် ယင်းဈေးစည်ပင် တာဝန်ရှိသူတို့က ပြောသည်။
ဓါတုဆေးသုံးစွဲထားသည့် စားကုန်များကို တွေ့ရှိပါက ပစ္စည်းသိမ်းဆည်း ဖျက်ဆီးမည့်အပြင် အန္တရာယ် ရှိမှန်းသိရက်နှင့် အသုံးပြုသူအား “အမျိုးသား အစားအသောက် ဥပဒေ” အရ ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်အထိလည်း ချမှတ်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ယခုကဲ့သို့ စစ်ဆေးမှုများကို ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ ဘုရင့်နောင်ဈေး၊ သိမ်ကြီးဈေး၊ သံဈေး၊ အင်းစိန်ဈေး၊ စသည့်ဈေးကြီးများတွင် တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ် စစ်ဆေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း FDA မှ တာဝန်ရှိသူကပြောသည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 9:31 AM No comments:
Baby Number 19 On The Way For Reality TV Mum
A US mother has discovered she is pregnant with her 19th child weeks before she is due to becomeagrandmother.
The ever-expanding Duggar family
Michelle Duggar from Tontitown, Arkansas, is expecting the new arrival in March next year.
The 42-year-old and her husband Jim Bob, who runacommercial property business, are the stars of their own reality TV show 18 Kids And Counting.
Mrs Duggar suspected she could be pregnant after her youngest child, eight-month-old Jordyn-Grace, became fussy while feeding on breast milk.
The veteran mum knew from past experience this wasasign she could be expecting again so she tookapregnancy test and was "pleasantly surprised" to find it was positive.
"I was just jumping up and down going, 'Thank you, Lord. Here am I - 42, thinking my baby days are over - and you've blessed us with another one'," she said.
Mrs Duggar said her health is fine as the pregnancy progresses just like the previous 18 albeit with bouts of morning sickness.
"I am just so grateful that I have good health thus far and I'm just enjoying playing with my kids every day," she said.
As well as preparing for her own baby, Mrs Duggar is gearing up to becomeagrandmother for the first time next month.
Her eldest son Josh, 21, and his wife Anna are expectingababy girl, whom they plan to name Mackynzie, on October 18.
Meanwhile, the Duggars are considering name suggestions for the youngster who will join their family of 10 boys and eight girls, whose names all start with the letter J.
Along with Josh and Jordyn-Grace, the brood already includes: twins Jana and John-David, 19, Jill, 18, Jessa, 16, Jinger, 15, Joseph, 14, Josiah, 13, Joy-Anna, 11, twins Jeremiah and Jedidiah, 10, Jason, 9, James, 8, Justin, 6, Jackson, 5, Johannah, 3, and Jennifer, 2.
Posted by ငဝန်နဒီ at 10:40 AM No comments:
အင်တာနက်မှတဆင့် အင်တာနက်သုံးစွဲသော အမျိုးသမီးများ အားအဓိကထား ခြိမ်းခြောက်ငွေတောင်းမှုများဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသူအမျိုးသမီး အား အသက် ၃၀ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတဦး ကငွေကျပ် သုံးသိန်းကို သူ့ ထံသို့ ပေးပို့ ရမည် မပို့ ပါက အင်တာနက်မှတဆင့် သူမ ဓာတ်ပုံများဖြန့် မည် ဟု ခြိမ်းခြောက်ငွေတောင်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သောကြောင့် မြောက်ဥက္ကလာပ ရဲစခန်းတွင် တိုင်ကြားထားသည်။
အင်တာနက်မှတဆင့် ဝက်ဆိုက်တွင် ဓာတ်ပုံများဖြန့် မည် ဟု ခြိမ်းခြောက်ငွေတောင်းမှု မှာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကတည်း ကဖြစ်ပွားခဲ့သောကြောင့် အင်တာနက်သုံးစွဲသော အမျိုးသမီးများ သတိထား သုံးစွဲသင့်ပေသည်။
သာမန်အရပ်သူများအား ခြိမ်းခြောက်ငွေတောင်းမှု များကို ကူညီဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ပါစေ။ ။
သာမန်အရပ်သူများအား စိတ်ပူပန်မှုလျော့နည်းစေရန် မြန်မာ ညစ်ညမ်ဝက်ဆိုက်ဧ။် စည်ကမ်းချက်များ
အသက်(၁၈)နှစ်အောက် လူငယ်များ (လုံးဝ)၀င်ရောက်ခွင့်မပြုပါ။
သာမန်အရပ်သူများ၏ပုံများ၊ နိုင်ငံရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့်
ပုံများ၊ အလံများ ၊ အထိန်းအမှတ်သင်္ကေတများ ၊ အများကြည်ညိုလေးစားသည့်
လူ၊ ဘာသာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပုံများအား အသုံးပြုခြင်းမပြုရန်။
နိုင်ငံရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းဆိုဒ်များအား ရေးသားဖေါ်ပြခြင်းများအား လုံးဝ ခွင့်မပြုပါ။
နိုင်ငံတကာနှင့်အများကြည်ညို လေးစားသည့် လူ ၊ နာမည် ၊ ပုံ ၊ စာ ၊ ဘာသာရေး များအား
ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဝါဒဖြန့် ဖော်ပြခြင်းများ အား (လုံးဝ) လုံးဝခွင့်မပြုပါ။
သာမန်အရပ်သူများ၏ အမည်၊ ဖုံးနံပါတ် ၊ အီးမေး ၊ နေရပ်လိပ်စာများ အား အရှက်ကွဲစေရန်
အလို့ငှာ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖော်ပြခြင်းများအား လုံးဝ ခွင့်မပြုပါ။
ဆဲဆိုသော စကားလုံးများ၊ အများအား အနှောက့်အယှက် ဖြစ်စေသော
ကြမ်းတမ်းသောစကားလုံးများ အား ဆိုဒ်အတွင်းရှိ မည်သည့်နေရာတွင်မှ
ရေးသားပြောဆိုခြင်းများကို (လုံးဝ) လုံးဝ ခွင့်မပြုပါ။
ငါးဖမ်းသင်္ဘောနစ်မြုပ် ၁၇ ဦး သေဆုံး
ရန်ကုန်မြစ်ဝတွင် သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့က ငါးဖမ်းသင်္ဘောတစီး နစ်မြုပ်သွားရာ သင်္ဘောပေါ် ပါရှိသူ ၁၇ ဦးလုံး သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး သတင်းရပ်ကွက် အဆိုအရ သိရသည်။
နစ်မြုပ်သွားသော သင်္ဘောသည် ပုဂ္ဂလိကပိုင် သင်္ဘောဖြစ်ပြီး၊ ပါရှိလာသူ တရုတ်လူမျိုး ၃ ဦးနှင့် မြန်မာ ၁၄ ဦး သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့မှ အရာရှိတဦးက ပြောသည်။
“ပါသွားတဲ့လူ အကုန်သေပါတယ်။ ၁၇ ဦး သေပါတယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
သင်္ဘောနစ်မြုပ်သွားသည့် အကြောင်းရင်းကို မသိသေးသော်လည်း အခြား သင်္ဘောတစီးနှင့် တိုက်မိခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟူ၍ သံသယရှိနေကြပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 8:50 AM No comments:
တောင်ဒဂုံ စက်မှုဇုန် မီးလောင်
ရန်ကုန်တိုင်း ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ တောင်ဒဂုံ စက်မှုဇုန် ၂ တွင် ယနေ့ ညနေ ၃ နာရီခွဲခန့်မှ စတင်ကာ မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားကြောင်း သိရသည်။
မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားနေကြောင်း တောင်ဒဂုံ စက်မှုဇုန် ၁ စီမံခန့်ခွဲရေးရုံးက အတည်ပြုပြောဆိုသည်။
''ဟုတ်ကဲ့ လောင်နေပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄၅ မိနစ်က စလောင်တာပါ'' ဟု စီမံခန့်ခွဲရေးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောသည်။
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းတွင် စက်မှုဇုန် ၁ ၊ ၂ နှင့် ၃ ဟူ၍ ဇုန်သုံးဇုန် တည်ရှိသည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 8:48 AM No comments:
တောင်ကိုရီးယားနဲ့ နယ်ခြား မြောက်ကိုရီးယား ပြန်ဖွင့်
တောင်ကိုရီးယားနဲ့ ယာဉ်အကူးအသန်း တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ကန့်သတ်ထားတာတွေကို မြောက်ကိုရီးယားက ပြန်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ အတွင်းမှာရှိတဲ့ နှစ်နိုင်ငံ ပူးတွဲစက်မှုဇုန်ကို ပစ္စည်းတွေနဲ့ လူတွေ သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးနေတာတွေက ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။
မြောက်ကိုရီးယားရှိ ကေဆောင်း စက်မှုဇုန်သို့သွားမည့် တောင်ကိုရီးယား ကုန်တင်ယာဉ်များ။
စက်တင်ဘာ ၁၊ ၂၀၀၉။
ကေဆောင်း (Kaesong) စက်မှုဇုန်ကို သွားဖို့ လက်ရှိ တနေ့ကို ၆ ကြိမ်ဖွင့်ခဲ့ရာက တနေ့ ၂၃ ကြိမ် ဖွင့်ပေးတော့မယ်လို့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောပါတယ်။
နယ်စပ်ကို တကြိမ်ဖြတ်သွားနိုင်တဲ့ လူဦးရေနဲ့ ယာဉ်စီးရေကိုလည်း ကန့်သတ်ထားတော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောပါတယ်။
ကေဆောင်း စက်မှုဇုန်မှာ တောင်ကိုရီးယားစက်ရုံ ၁၁၀ ရှိပြီး မြောက်ကိုရီးယား အလုပ်သမား ၄၀,၀၀၀ အလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားနဲ့ ဆက်ဆံရေး တိုးတက်အောင် ကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့ မြောက်ကိုရီးယားက မကြာမီက အရိပ်အကဲ အများကြီး ပြသခဲ့ရာမှာ နယ်စပ်ကို ပြန်ဖွင့်တာကလည်း တခုဖြစ်ပါတယ်။
သမားရိုးကျဝါဒီ သမ္မတ လီမြောင်ဘက်ခ် (Lee Myung-bak) သမ္မတဖြစ်လာခဲ့တဲ့ အခါမှာတော့ နှစ်နိုင်ငံကြား ဆက်ဆံရေးက စယိုယွင်းလာခဲ့ပါတယ်။ အကူအညီပေးရေးနဲ့ မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ နျူကလီးယားလက်နက် အစီအစဉ်ကို ချိတ်ဆက်ထားလိုက်တာမျိုးလို မစ္စတာလီရဲ့ တင်းမာတဲ့ မူဝါဒတွေကို မြောက်ကိုရီးယားက ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 8:42 AM No comments:
ရန်ကုန်မြို့၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေးကားဝင်းအတွင်းတွင် အလှပြင်ခန်း (Beauty Saloon) ဆိုင်းဘုတ်တင်ထားသော အနှိပ်ခန်းများ ပိုမိုများပြားစည်ပင်နေသည်။
အနှိပ်ခန်းများတည်ရှိရာ လမ်းထိပ်များတွင် အနှိပ်ခန်းပွဲစားများ၏ စည်းရုံးလူခေါ်နေမှုများကြောင့် ခရီးသွားပြည်သူများ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေကြသည်။
အနှိပ်ခန်းအမျိုးသမီးငယ်များက အမြင်မသင့်တော်သည့် အ၀တ်အစားများဝတ်ကာ လက်ဟန်ခြေဟန်ဖြင့် ဧည့်သည်အား ဆွဲဆောင်နေမှုများသည် အများအမြင်၌ မသင့်တော်ဟု ခရီးသွားများက ပြောသည်။
အောင်မင်္ဂလာကားဝင်းအတွင်းရှိ မော်လမြိုင်လမ်း၊ တနင်္သာရီလမ်း၊ ပုဂံ၊ မြောင်းမြ၊ ဒဂုံ၊ မကွေး၊ စစ်တွေလမ်းတိုင်းလိုလို၌ အဆိုပါ အလှပြင်ခန်းအမည်ခံ (မာဆတ်) အနှိပ်ခန်းများရှိပြီး လူခေါ်ပွဲစားများလည်း ပိုများလာကြောင်း မျက်မြင်တို့က ပြောသည်။
အဝေးပြေးကားဝင်း ပင်မ၀င်ပေါက်နှင့် ပတ္တမြားဆောင်အနီး၌ စွဲလမ်း၊ လင်းလက်၊ တနင်္သာရီလမ်း၌ New Dream, Shine, ဥဿာလမ်း၌ He&She, မိုးဆမ်းပန်း၊ စက်မှုလမ်း၌ ဧကရီ၊ သရဖူ၊ ဧပရယ်ဦး၊ Romantic, Spice Girls တို့နှင့် အဝေးပြေးတ၀င်းလုံး၌ မာဆတ်အနှိပ်ခန်း (၃၈) ဆိုင်ရှိသည်ဟု ဆိုင်ပိုင်ရှင်တဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါ အနှိပ်ခန်းများသို့ လာရောက်အပန်းဖြေသည့် ဧည့်သည်များအတွက် ၀န်ဆောင်ခမှာ အိပ်စင်နှင့် တနာရီ Section (၃,၀၀၀) ကျပ်၊ အိပ်ခန်းနှင့် (၄,၀၀၀) ကျပ် သတ်မှတ်ထားကြောင်း၊ မာဆတ်မိန်းကလေးအများစုမှာ အသက် (၂၀) နှင့် (၂၅) နှစ်အကြား ရှိကြပြီး ဆိုင်ပိုင်ရှင်က တနာရီ Section (၅၀၀) ကျပ် လုပ်အားခရှင်းပေးကြောင်း ၀န်ထမ်းမိန်းကလေးတဦးက ပြောသည်။
အသွေးအသားဆက်ဆံ၍ရသည့် မာဆတ် (အနှိပ်ခန်း) အချို့ရှိသည်ဟု သိရပြီး ၀န်ဆောင်မှုမှာ အထက်ပါငွေကြေးထက် အနည်းငယ်ပိုသည်ဟု သိရသည်။
ဆိုင်ပိုင်ရှင်များအနေဖြင့် စစ်ဘက်လုံခြုံရေး၊ ဒုစရိုက်နှိမ်နင်းရေး၊ သတင်းတပ်ဖွဲ့၊ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး၊ မှုခင်းတပ်ဖွဲ့၊ နယ်မြေရဲကင်းအပါအ၀င် အဖွဲ့အစည်း (၂၀) ခန့်ကို ညစဉ် လိုင်းကြေးပေးနေရသည်။
အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးကားဝင်းသည် မြောက်ဥက္ကလာပအုပ်ချုပ်ရေးအတွင်း ရှိသည့်အတွက် ကားဝင်းတာဝန်ရှိသူများ သာမက မြောက်ဥက္ကလာပနယ်မြေ လုံခြုံရေးတို့ကိုပါ လိုင်းကြေးပေးဆောင်နေရပြီး တလလျှင် (၃) သိန်းနှင့် (၅) သိန်းကြား ရှိသည်ဟု ဆိုင်ပိုင်ရှင်များကပြောသည်။ နေရာအလိုက် ဆိုင်ခန်းငှားရမ်းခမှာ (၅) သိန်းနှင့် (၇) သိန်းကြားရှိသည်။
တပ်မတော်၊ ရဲ အငြိမ်းစားအရာရှိများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ဝင်များ ဖွင့်လှစ်သည့် အနှိပ်ခန်းများသည် လိုင်းကြေး ပေးဆောင်ရမှု အခြားအနှိပ်ခန်းပိုင်ရှင်များထက် နည်းသည်ဟု သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်း တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ထားသော အမျိုးသမီးအလှပြင်ဆိုင် (Beauty Saloon) များသည် မြို့နယ်အလိုက်၊ ဆိုင်ခန်းအပြင်အဆင် အကျယ်အ၀န်းအလိုက် စည်ပင်သာယာသို့ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကြေး နှစ်စဉ်ပေးသွင်းကြရသည်။
အောင်မင်္ဂလာကားဝင်း အနှိပ်ခန်းများသည် စည်ပင်သာယာ (အခွန်ဌာန) သို့ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကြေး၊ အမြတ်ခွန်ဌာနသို့ အမြတ်ခွန်ပေးဆောင်စရာမလိုသော်လည်း လစဉ် (တရားမ၀င်) လိုင်းကြေး ပေးဆောင်နေရသည်ဟု ဆိုင်ပိုင်ရှင်များက ပြောသည်။
အောင်မင်္ဂလာကားဝင်းအတွင်း Beauty Saloon ဆိုင်းဘုတ်တင် အနှိပ်ခန်းများတွင် တရားဝင်လုပ်ငန်းလိုင်စင် ပေးဆောင်ထားသည့် ဆိုင်ခန်းအရေအတွက် မည်မျှ ရှိမရှိ အဝေးပြေးကားဝင်း စည်ပင်သာယာ (အခွန်ဌာန) သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းသော်လည်း ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိပေ။
ကားဝင်းအတွင်း အနှိပ်ခန်းများ ယမန်နှစ်မှစ၍ များပြားလာသည့်အတွက် အဆိုပါကားဝင်းအား တရားဝင်လုပ်ကိုင်ခွင့် ပေးထားသော ပြည့်တန်ဆာဝင်းဟု ရန်ကုန်မြို့ခံအချို့က ပြောဆိုကြပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖော်ထုတ်မပေးနိုင်သည့် အစိုးရ၏ အားနည်းချက်ဟု အများက သုံးသပ်ကြသည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 11:45 PM No comments:
နိုင်ငံတကာကျောင်းInternational School Yangon – ISY တွင် ကျောင်းသား ၅ ဦး A (H1N1) ကူးစက်ခံရ
ရန်ကုန်မြို့ရှိ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းတကျောင်း၌ ကျောင်းသား ၅ ဦးတွင် A (H1N1) တုပ်ကွေးရောဂါ ကူးစက်ခံရသဖြင့် ကျောင်းကို သီတင်းပတ် တပတ်ကြာ ပိတ်ထားရသည်။
ဗဟန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ International School Yangon – ISY ကျောင်းတွင် သူငယ်တန်းမှ ၄ တန်းအတွင်း သင်ကြားနေသော ကျောင်းသားများတွင် နောက်ဆုံးပေါ် တုပ်ကွေး တွေ့ရှိပြီးနောက် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ကျောင်းခေတ္တပိတ်ပေးရန် ညွှန်ကြားခဲ့သည်။
“ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ကျောင်းပိတ်ခိုင်းထားတာပါ။ ကျောင်းသား ၅ ယောက် A (H1N1) ကူးစက်ခံရလို့လေ။ အခု ၃ ယောက်ကတော့ သက်သာသွားပြီ။ လာမယ့်သီတင်းပတ်မှာ ကျောင်းတက်နိုင်တော့မှာပါ” ဟု ကျောင်းဒါရိုက်တာ မစ္စတာ တင်ထရာဗာ့ (Tim Travers) က ပြောသည်။ လာမည့် တနင်္လာနေ့တွင် ကျောင်းကိုပြန်ဖွင့်ရန် စီစဉ်ထားသည်။
ကျောင်းပြန်ဖွင့်သည့်အခါ A (H1N1) ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး (WHO)၊ စစ်အစိုးရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် အမေရိကန်သံရုံးတို့မှ အကြံပြုချက်အရ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု သူက ဆိုသည်။
ISY ကျောင်းတွင် နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ ခန့်မှ ကျောင်းသား ၄၂၇ ဦး ပညာသင်ကြားလျက်ရှိရာ မြန်မာကျောင်းသား ဦးရေ ၁၀၀ ကျော် ပါဝင်ပြီး ၁၂ တန်းအထိ ပညာသင်ကြားပေးနေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယမန်နေ့အထိ A (H1N1) ကူးစက်ခံရသူ ဦးရေ ၃၀ တွေ့ရှိခဲ့ရာ ၂၅ ဦးမှာ ဆေးရုံမှ ဆင်းသွားပြီဖြစ်ကာ ကျန် ၅ ဦးမှာလည်း သက်သာနေပြီဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများက ရေးသားဖော်ပြကြသည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 11:53 AM No comments:
ကိုးကန့်အရေး အမေရိကန် စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်
မြန်မာစစ်တပ်က တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ လူနည်းစု ကိုးကန့်တွေအပေါ် တိုက်ခိုက်နေတာတွေ ရပ်တန်းက ရပ်ပါလို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာပြည် အရှေ့မြောက်ပိုင်း တရုတ်နယ်စပ်အနီးမှာ မြန်မာစစ်တပ်က ကိုးကန့်လူမျိုးတွေကို တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်ရတယ်လို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် အီယန် ကယ်လီ (Ian Kelly) က မနေ့က ပုံမှန် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် အင်အားသုံး တိုက်ခိုက်တာတွေကို အသုံးမပြုဘဲ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေနဲ့ စားပွဲဝိုင်းမှာ အနှစ်သာရရှိတဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာတွေ ပြုလုပ်ပါလို့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက ထပ်လောင်း တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
သြဂုတ်လ ၂၆ ရက်နေ့က စတင်ခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ကိုးကန့် စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ၃၀,၀၀၀ ကျော်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာ ခိုလှုံခဲ့ကြပြီး အခု တချို့ အိမ်ကိုပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အပစ်ရပ်ထားတယ်လို့ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ အပြောကို မယုံကြတဲ့အတွက် အထိတ်တလန့် ရှိနေကြဆဲပဲလို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
အနှစ် ၂၀ ကြာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲခဲ့ပြီးနောက် ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်း မြန်မာစစ်သား ၂၆ ယောက် ကျဆုံးခဲ့ပြီး ကိုးကန့်ဘက်က ၈ ယောက် သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ မြန်မာစစ်တပ်ဘက်က ပြောပါတယ်။
အပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေကို နယ်ခြားစောင့်တပ်တွေအဖြစ် အသွင်ပြောင်းဖို့အတွက် စစ်အစိုးရက ကမ်းလှမ်းထားပေမယ့် အပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေက လက်မခံတာကြောင့် အခုလို ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်ကြရတယ်လို့ ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံအဖွဲ့တွေက ပြောနေကြပါတယ်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 11:50 AM No comments:
RIT/YIT Electrical Engineering Alumni Saya Puzawpw...
ငါးထောင်တန် ငွေစက္ကူများ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထွက်ရှိ ...
ဂျပန် ရှိ Softbank အသုံးပြုသူများ အတွက်...ဖုန်းလို...
ရုပ်ရှင်နှင့် ဗီဒီယို ထုတ်လုပ်သူများ သီချင်းအတွက် ...
မောင်သောင်းဒီး ဂျပန်စက္ကူအရုပ်ချိုးပြိုင်ပွဲ တတိယ ...
ဗြိတိန် တွင် ပညာသင်မည့်သူများ အတွက် သံရုံးက လွယ်ကူ...
သူငယ်ချင်း သန့် ဇင်သန်း တိုကျို (အိုဒိုင်ဘာ) ရောက်...
စင်ကာပူ တွင် လိမ် စားသူ မြန်မာအမျိုးသမီး နှင့် ကုပ...
အမျိုးသမီးများ၏ မလုံမခြုံ ခန္ဓာပုံများ ခိုးရိုက်သူ ...
တရုတ်လူမျိုးတွေ ဖြစ်တဲ့ အတွက် မြန်မာပြည်ကို မပြန်ခ...
တရုတ် ရှင်ဂျန်းပြည်နယ် လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်း ထပ်ဖြစ...
ထိုင်းနိုင်ငံဖွား မြန်မာကလေးငယ် ဂျပန် သွားနိုင်ပြီ...
ဓါတ်ခွဲခန်းကားဖြင့် အစားအသောက်များတွင် ဆိုးဆေးသုံး...
တောင်ကိုရီးယားနဲ့ နယ်ခြား မြောက်ကိုရီးယား ပြန်ဖွင်...
နိုင်ငံတကာကျောင်းInternational School Yangon – ISY...